သတ်ဖြတ်ခံရသည့် ရွာသားနှစ်ဦး အတွက်လျော်ကြေး မိသားစုများအား အတင်းလက်မှတ်ထိုး လက်ခံခိုင်း
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းယန်းအခြေစိုက် မြန်မာ စစ်တပ်က ဝ နှင့် သျှမ်းရွာသား ၂ ဦးအား သတ် ဖြတ်ပြီး လျော်ကြေးငွေ အနည်းငယ်ကို မယူမနေရ လက်မှတ်ရေးထိုးယူခိုင်းကြောင်း မကျေနပ်ပါက ကျိုင်းတုံအထိ အမှုဖွင့်အရေးယူ နိုင်ကြောင်း မိုင်းခတ်စစ်ဗျူဟာမှ အရာရှိတဦးက ပြောသည်ဟု ဆိုသည်။
“ နိုဝင်ဘာလက စပါးသွားတင်ပြီးပြန်လာတဲ့ အိုက်ပေါက်နဲ့ အိုက်အင်းကို ဗမာစစ်တပ်က သျှမ်းစစ်သား အကြောင်း မေးရင်း နဲ့ သတ်လိုက်တာလေ။ သျှမ်းသံတော်ဆင့်က အဲ့ဒီသတင်း(၂၃၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁ မှာ) ထွက်ပြီး ၃ ရက်အကြာ အဲ့ဒီ ခမရ ၂၈၁ က မှ တပ်မှူးတဦးက ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုတွေကိုခေါ်ပြီးပေးတာ။ အမိန့်နဲ့ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာ။ လျော်ကြေးက ၂ ယောက် စလုံး အတွက် ၇ သိန်း ၂ သောင်းပေးတယ်တဲ့” ဟု ကျိုင်းတုံ ရောက်မိုင်းခတ်ဒေသခံ တဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်အား ပြောပြသည်။
ထိုင်းဘတ်ငွေ ၂ သောင်း ၈ ထောင်နှင့် တန်ဖိုးညီမျှသည့် အဆိုပါ လျော်ကြေးငွေအပေါ် မကျေနပ်ပါက မိုင်းခတ် တရားရုံး သို့လည်းကောင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့သို့လည်းကောင်း ကျန်ရစ်သူဆွေမျိုးများ သွားရောက် တိုင်ကြား နိုင်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့သေးသည်ဟု သေဆုံးသူနှင့်အမျိုးတော်စပ်သူတဦးကပြောသည်။
၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပါမိုင်းခတ်ဒေသခံက- “ အသတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာ ဝ အမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ခုလို တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေချိန်မှာတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ တွေ မကျေနပ်ရင် နေပြည်တော်အထိ တက်ပြီးပြဿနာရှာမှာ စိုးလို့နဲ့တူတယ်။ အဲ့ကြောင့် ပိုက်ဆံအနည်းငယ်သာ လျော် ကြေးပေးပြီး ခုလိုပြန်အကျပ်ကိုင်လိုက်တာဖြစ်တယ်”- ဟုသုံးသပ် ပြောဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက် က မိုင်းယန်းအခြေစိုက် ခလရ ၂၈၁ တပ်က ကျိုင်းတုံမြို့ (အနောက်မြောက်ဘက် ၃၀ မိုင်) မုံးငဲန်း အုပ် စု အရှေ့မြောက်ဖက် ၁၂ မိုင်အကွာ ဝမ့်ဟိုဇင်း (ကျိုင်းတုံ - မုံးငဲန်း လမ်းမပေါ်၊ မုံးငဲန်း တောင် ဘက် ၁၂ မိုင်) ရွာမှ ဒေသခံ ရွာသား ၂ ဦးအား ဖမ်းဆီးကာ သူပုန်အကြောင်းမေးမြန်းရာ ‘ သျှမ်းသူပုန်များတခါမှရွာ ထဲမဝင်လာ’ ဟု ဖြေ သဖြင့် ပစ်သတ်လိုက်သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, December 17, 2011 Links to this post
ချင်းအမျိူးသားနေ့အဖြစ် တရားဝင် ကျင်းပခွင့်ပြုရေး တောင်းဆိုစာကို ၀န်ကြီးချူပ်က ပယ်ချ
လာမည့် ၂၀၁၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ၆၄ နှစ်မြောက် ချင်း အမျိူးသားနေ့ ကိုချင်းပြည်နယ် တွင် “အမျိူးသားနေ့” အဖြစ် တရားဝင် ကျင်းပ ခွင့်ပြုရေး တောင်း ဆိုချက်ကို ၀န်ကြီးချူပ်ဦးဟုန်းငိုင်းက ပယ်ချလိုက် သည် ဟုသိရသည်။
ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မင်းတပ်မြို့ ချင်းအမျိူးသားနေ့ ကျင်းပရေး ကော်မတီအဖွဲ့က ချင်းပြည်နယ်တွင် ချင်းအမျိူးသား နေ့ကို “ပြည်နယ်နေ့”အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ “အမျိူးသားနေ့” အဖြစ် တရားဝင် ကျင်းပခွင့်ပြုရန် ယခုလဆန်းပိုင်းက စာတင်ခဲ့ ရာတွင် ချင်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးချူပ်ဦးဟုန်းငိုင်းက ပယ်ချလိုက် သည်ဟု ချင်း တိုးတက်ရေးပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(၂) ဦး ရှိန်းထွန်းပြောသည်။
“မင်းတပ်မြို့ ချင်းအမျိူးသားနေ့ ကျင်းပရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးက ကျနော့်ကိုဖုန်းနှင့် လမ်း အကြောင်းကြာလိုက်တာပါ ၊ ချင်းအမျိူးသားနေ့ အနေနဲ့ တရားဝင် ကျင်းပ ခွင့်ပြုဖို့ ၀န်ကြီးချူပ် ဆီစာနဲ့ တောင်းဆိုပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ၀န်ကြီးချူပ်က စာပြန် တဲ့အခါမှာ ဒီကိစ္စ တွေက ခင်များ တို့လုပ်ရမယ့် အလုပ်မ ဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိူးပြောလိုက် တော့ အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်” ဟု ဦးရှိန်းထွန်းကပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့်၁၉၇၄ ခုနှစ်က ဦးနေ၀င်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ဆိရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ) အစိုးရ လက်ထက် ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့ကို ချင်းအမျိူးသားနေ့အဖြစ် ကျင်းပခွင့်မရှိ တော့ဘဲ ယနေ့ချိန်ထိ “ချင်းပြည် နယ်နေ့” အဖြစ်နှင့်သာ ကျင်းပခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချူပ်ဦးဟုန်းငိုင်းက “ ချင်းအမျိူးသားနေ့” အဖြစ်အမည်ဖြင့်ကျင်းပ ခွင့်တောင်း ဆိုချက်ကို ဖယ်ချသည့် အတွက်ကြောင့် လာမည့် နှစ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ “ချင်းအမျိူးသားနေ့” ကိစ္စကို တင်ပြမည်ဟု ဦးရှန်းထွန်းက ပြောသည်။
“ ပြည် နယ် မှာ ဆွေးနွေးရမယ့် အရေး ကိုပြည်နယ် ၀န်ကြီးချူပ်ကို ပယ်ချ လိုက်ပြီဆိုတော့ ၊ ၀န်ကြီးချူပ် ကို တာဝန်ခံတာက နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဆိုတော့လေ ၊ ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်မှာ တရားဝင် ဆွေးနွေး ရပါလိမ့်မယ်’’ဟု သူ ကပြောသည်။
၁၉၄၈ ခှုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့က ချင်းပြည်နယ်ဖလမ်းမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့ သော ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ချင်းအမျိူးသား ညီလာခံမှာ တက်ရောက် လာခဲ့ကြသော ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ငါးထောင်ကျော်က ချင်းပြည်နယ်၏ သက်ဦးစံပိုင်မြေရှင် ပဒေသရာဇ်စနစ်ကို တခဲနက် ကန့်ကွက် ဖယ်ရှား လိုက်ကြသည့် နေ့ကို အစွဲပြုပြီး ၁၉၅၀ တွင် ချင်းရေရာကောင်စီမှ ချင်းအမျိူးသားနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး အကြိမ် ချင်းအမျိူးသားနေ့ကို ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မင်းတပ်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့ကြပြီး ယင်းအချိန်က နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချူပ်ဖြစ်တဲ့ ဦးနု နဲ့ အခြား တိုင်းရင်းသားဝန်ကြီးများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် တခြားတိုင်းရင်းသားများ ၏ အမျိူးသားနေ့ကို အမျိူးသားနေ့ အနေဖြင့် တရားဝင် ကျင်းပခွင့် မပြုခြင်း သည် တိုင်းရင်းသားများအမျိူးသားနေ့ကို အသိအမှတ် မပြုရာကျ သည် ဟုဦးရှိန်းထွန်း ကပြောသည်။
“တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နယ်ချဲ့တွေကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ အမျိူးသားနေ့ တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် အသိ အမှတ်မပြုတဲ့ သဘောမှာရှိတယ်၊ ပြီးရင်လည်း အမျိူးသားနေ့ ဆိုတာ တခုတည်းရှိ ရမယ် မြန်မာတွေ ယူထားတဲ့ အမျိူးသားနေ့ကို တိုင်းရင်းသား တွေအနေနဲ့ ဒီဟာကိုဘဲ ယူရမယ် ဆိုတဲ့ အမြင်မျိူး သူ တို့မှာရှိတယ်’’ ဟု သူ ကပြောသည်။
ရင်းမြစ်...Khonumthung News Group
၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ ညနေမှာတော့ ရန်ကုန် ပန်းဆိုးတန်း နန်းယုဟိုတယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ မိတ်ဆုံပွဲမှာ ကျွန်တော်က အဲဒီစိတ်ကူးကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆုံပွဲက ဆရာဦးဝင်းတင်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကွယ်လွန်သူ ကြေးမုံဦးစိုးနိုင်ရဲ့သား မေတ္တာမိုး ကိုမောင်မောင်နိုင်က ဧည့်ခံတဲ့ ပွဲပါ။ ဆရာဦးဝင်းတင်ကို အကြောင်းပြုပြီး မိတ်ဆွေတွေကို နှစ်စဉ် ဧည့်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထောင်ထဲမှာ နှစ် ၂၀ နေခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကြီး ဦးဝင်းတင်ရဲ့ အထိမ်းအမှတ် ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်လို့ အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများနဲ့ လွတ်မြောက်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း များရဲ့ သက်သာချောင်ချိရေးကို ဦးစားပေး သင့်တယ်။ တော်ဝင်နှင်းဆီခြံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း သုံးဦး (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးနဲ့ ဦးဝင်းတင်) ကို လူငယ်များက ကန်တော့တဲ့ပွဲမှာ ဆရာဦးဝင်းတင်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်သားများ လွတ်မြောက်ရေးသာမက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများရဲ့ ဘ၀တွေ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ပြောခဲ့တာဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ကူးကို ပိုပြီးအားကောင်းသွားစေပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သတင်းစာဆရာတွေထဲက လူမှုဘ၀ချို့တဲ့နေသူများကိုပါ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းက ကူညီသင့်တယ်လို့ ဆွေးနွေးသူအချို့လည်ူး ရှိပါတယ်။ ဆရာဦးဝင်းတင်က အဲဒီဆွေးနွေးချက် ကို ထောက်ခံပါတယ်။
တောင်းပန်ကြားလွှာနှင့် အတူ လက်မှတ် ၁ သောင်းကျော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ထံပေးပို့
ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ပိဋကတ်တိုက် ဖွင့်ပွဲတွင် တွေ့ရသည့် ရွှေည၀ါဆရာတော်
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က ဆရာတော်အား ကျောင်းတိုက်မှဖယ်ရှားမည် ဆိုသည့်သတင်းကြောင့် စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် လာရောက်ကြည့်ရှုနေကြသည့် တကာ၊ တကာမအချိ့ ကိုမြင်တွေ့ရစဉ်၊
အံ့ဖွယ် မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် စံပြအမျိုးသမီး
ပိန်ပိန်ပါးပါး မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး က သန်းပေါင်းများစွာသော မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေသန်း ၆၀ ကျော်...
ချစ်ခင်ယုံကြည်မှု ကို သာမက သန်းပေါင်းများစွာသော ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ အလွှာအသီးသီးက လူတွေရဲ့လေးစားမှု၊ ယုံကြည်မှု တွေကို ရယူနိုင်ဖို့ ဆိုတာ သာမာန် အားဖြင့် မလွယ်ကူလှပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အထူးတလည် စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါပဲနဲ့သူမရဲ့ နေအိမ်ထဲကနေပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က အနုပညာရှင်တွေ က အစ ဘုန်းတော်ကြီး တက်စမွန်တူးတူးနဲ့ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမား အစရှိတဲ့ ဘာသာရေးနယ်ပယ်က အထင်ကရ ခေါင်းဆောင်တွေ ဆီက အဆုံး၊ လေးစားမှု၊ ယုံကြည်မှု တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အံ့ဖွယ် မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် စံပြအမျိုးသမီး မီးရှူးတန်ဆောင်အလင်းရောင်စဉ်ပါ။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Virginia Tech တက္ကသိုလ် က ကျောင်းသား ၃၀၀၀ ခန့် ကို Skype ကနေတဆင့် ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်နေ့ တုန်းက တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် (မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး) ကို ကမ္ဘာတစ်ဘက်ခြမ်းက မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ က လေးစားချစ်ခင်စွာနဲ့တွေ့ ဆုံမေးမြန်းနေကြတာ ကို မြင်ရတာ အင်မတန်မှ စိတ်ကြည်နှူးစရာပါ။
ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခေါင်းဆောင်တွေ အများကြီး ရှိပေမယ့်
လူငယ်ထုအပေါ် လွမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိမှုမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဘယ်သူမှ မမှီကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
နိုင်ငံပေါင်းစုံကလာတဲ့ ကျေင်းသားတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စကားပြောခွင့်ရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ကြပြီး၊ skype ကနေ ဒေါ်စုရုပ်ပုံပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက် “အောင်ဆန်းစုကြည်” “အောင်ဆန်းစုကြည်” ဆိုပြီး ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ၄၅မိနစ်လောက် ကြာမြင့်တဲ့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှု မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ကျောင်းသားတွေ ရဲ့မေးခွန်းတွေကို ရီရီမောမောနဲ့ဖြေကြားပေးရင်းအသေးစိပ်ကို Youtube မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ နယူးကလီးယားလက်နက်ကို ထုတ်နိုင်ပြီး စစ်တပ်ကြီး ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ..
ငွေကြေးတောင်းတင်းတဲ့ အခြံအရံတွေနဲ့နေနိုင်တာဟာ အံ့ဖွယ်တိုင်းပြည်အင်အားမဟုတ်ဘူး။
စွန့် လွတ်အနစ်နာခံမှု နဲ့ 
ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသမှုတွေ သာလျှင် .....
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကုလနျူကလီးယား စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သွားရောက်လို
(Reuters သတင်းမှ 15 Dec 2011 ရက်စွဲပါ “UN nuclear watch dog wants to visit Myanmar” သတင်းကို Transparency Myanmar မှဘာသာပြန်ဆိုသည်)
နျူကလီးယားလက်နက် ထုတ်လုပ်ရန် ကြိုးစားနေသည်ပာူသော မနှစ်က ပြည်ပရောက် မြန်မာသတင်းဌာန တစ်ခု၏ စွပ်စွဲချက်ကို ငြင်းဆိုခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ နျူကလီးယားနှင့် ပတ်သက်သည့်နေရာများသို့ သွားရောက်ခွင့်ရရှိရန် ကုလသမဂ္ဂ နျူကလီးယား စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက ကြိုးစားနေကြောင်း ယင်းကိစ္စနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိသူ သံတမန်တစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။
ဆယ်စုနှစ်များစွာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အလွန်တွင် အခြေခံကျကျပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ စတင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ အနုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ IAEA မှ စစ်ဆေးရေးမှူးများ လာရောက်နိုင်ကြောင်း စက်တင်ဘာလအတွင်း ဆွေးနွေးမှုများတွင် မြန်မာတာဝန်ရှိသူများက ခွင့်ပြုလိုက်ကြပြီ ဖြစ်သည်။
IAEA အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ညီလာခံ၏ အဝန်းအဝိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဆွေးနွေးမှုသည် မြန်မာနျူကလီးယားကိစ္စ တိုးတက်ဖြေရှင်းနိုင်မည့် မျှော်လင့်ချက်များကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်ပာု ပြောကြားသော အဆိုပါသံတမန်က IAEA သွားရောက်ကြည့်ရှုလိုသည့် နေရာများကိုမူ သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိပာု ဖြည့်စွက် ပြောကြားသည်။ ယင်းကိစ္စကို IAEA က လတ်တလော မှတ်ချက်မပေးသေးပါ။
အရှေ့တောင်အာရှ အာဏာရှင်နိုင်ငံကို စွန့်ခွာလာသော တပ်ပြေးအရာရှိများက ၎င်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နျူကလီးယားလက်နက် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ တိုးတက်အောင် လျို့ဝှက်စီစဉ်နေကြောင်း ဖွင့်ချ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် ၂၀၁၀ နှစ်လယ်ပိုင်း၌ နော်ဝေးအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းဌာနက အထောက်အထားများဖြင့် သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
IAEA အစီရင်ခံစာကို လေ့လာနေဆဲဖြစ်သည်ပာုသာ ထိုစဉ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် IAEA အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်အပြင် နျူကလီးယားမပြန့်ပွားရေး စာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အနုမြူလက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်လောက်အောင် စီးပွားရေးတောင့်တင်းခြင်းမရှိပါပာု မြန်မာကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးတင်ဝင်းက စက်တင်ဘာလတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာတို့သည် နျူကလီးယားကိစ္စ အပေါ် စွပ်စွဲမှုများကို ယခင်းကလည်း အစဉ်တစိုက် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နျူကလီးယားလက်နက် သုတေသနအစီအစဉ် ရှိနေကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည့် ပြည်ပရောက် မြန်မာသတင်းဌာနနှင့် မြန်မာတပ်ပြေးအရာရှိများ အကြားမှ အင်တာဗျူးများ၏ စွပ်စွဲချက်သည် သက်သော အထောက်အထား ခိုင်မာမှု အားနည်းနေသည်ပာု အမေရိကန်အခြေစိုက် ‘ဉာဏ်ကျယ်’ အုပ်စုတစ်စုက ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း Institute for Science and International Security(ISIS) က “နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား နျူကလီးယားမပြန့်ပွားရေး ရည်မှန်းချက် စည်းကမ်းများကို အပြည့်အဝ တာဝန်ယူ လိုက်နာရန်နှင့် ၎င်းတာဝန်များကို အပြည့်အဝအကဲခတ်ခွင့်ပေးရန် တသမတ်တည်း ဆက်လက် ရပ်တည်တောင်းဆိုသွားရမည်” ပာု ပြောကြားထားသည်။
IAEA အနေဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အနူမြူဗုံးများ ပြန့်ပွားမှုကို တားဆီးရန်အတွက်၊ နျူကလီးယား ပစ္စည်းမှန်သမျှကို စစ်ရေးကိစ္စအတွက် ပြောင်းလဲခြင်းမပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် နျူကလီးယားအသုံးချမှုဆိုင်ရာ တားမြစ်ကိရိယာများကို ရရှိအောင် တရားမဝင် ခက်ခဲစွာ ကြိုးပမ်းခြင်းနှင့် နျူကလီးယားကိစ္စ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော IAEA မေးခွန်းမှန်သမျှကို ဖြေကြားရန် လိုအပ်သည်ပာု ‘ISIS’ ကဆိုသည်။
ထို့အပြင် ယခင်က မြောက်ကိုရီးယာူးနှင့် နည်းပညာလွှဲပြောင်းမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို တင်ပြခြင်း၊ ရုရှားသို့ နျူကလီးယားနှင့် ဒုံးကျည်အသုံးချမှုဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုအတွက် ကျောင်းသားများ ဆက်လက် စေလွှတ်နေခြင်းအပေါ် ရှင်းလင်းခြင်း တို့ကိုလည်း ပြုလုပ်သင့်သည်ပာု ISIS ဉာဏ်ကျယ်အုပ်စုက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခင်နှစ်က ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် စီးပွားရေးနိမ့်ကျသော မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် အီရန်နှင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံများသို့ နျူကလီးယားတားမြစ်နည်းပညာများကို တိတ်တဆိတ် ဖြန့်ဖြူးနေဖွယ် ရှိသည်ပာု တင်ပြထားသည်။
သို့သော်လည်း အကဲခတ်လေ့လာသူအများစုက မြန်မာနိုင်ငံသည် နျူကလီးယားစွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ရန် အလွန် အလှမ်းကွာဝေးနေဆဲပာု ယုံကြည်ထားကြပြီး အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများကလည်း မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေးတွင် နျူကလီးယားအစီအစဉ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် ပာူသော စိုးရိမ်မှုများကို အလေးမထားခဲ့ကြပေ။
ပြီးခဲ့သော နှစ်ပတ်ခန့်က သမိုင်းဝင်အထင်ကရ ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်လာသော အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပီာလာရီကလင်တန်က နျူကလီးယားလက်နက်နိုင်ငံဖြစ်အောင် ကြိုးစားမှုကြောင့် နိုင်ငံတကာက အရေးယူဒဏ်ခတ်ထားသော မြောက်ကိုရီးယားနှင့် တရားမဝင်ဆက်သွယ်မှုများကို အဆုံးသတ်ရန် နေပြည်တော် အာဏာပိုင်များကို တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံက နျူကလီးယားနည်းပညာအတွက် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါပာု ငြင်းဆို၍ အနုမြူလက်နက် နည်းပညာဖလှယ်ရန် ၎င်းတို့နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြသည် ပာူသော မှန်းဆချက်များအပေါ် ပထမဆုံးအကြိမ် တုန့်ပြန် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
သမိုင်းမှတ်ကျောက်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲများ မောင်ဝံသ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီက မြန်မာ့ရှေ့ဦး ကာတွန်းဆရာကြီး ရွှေတလေးဦးဘကလေး၏ ပင်တိုင်ကာတွန်းတစ်ခုမှာ- “ကမ္ဘာသူ ဓာတ်မှန်ပြသည် သို့ အမှားကိုအမှန်ကျအောင် ရေးရသည်ပဲ” လို့ စာချိုးလေးပုံသေထည့်တာ တွေ့ရဖူးတယ်။ သမိုင်းအမှား မှတ်တမ်းအမှားတွေကို အမှန်ဖြစ်အောင် သိမှီသူတွေက ပြင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်တွေအကြောင်းရေးကြသားကြပြီဆိုရင် အစွဲအလမ်းတွေ၊ ပယောဂတွေနဲ့ ရေးကြတာများတယ်။ သို့ပေမယ့် သမိုင်းဆိုတာ လိမ်ရေးလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုပါစို့။ ဦးနုခေါင်းဆောင်တဲ့ သန့်ရှင်းဖဆပလက အပြတ်အသတ်နိုင်သွားလို့ ဦးနုကအကျယ်အကျယ် မပြောတော့ဘဲ သူ့လူတွေကိုလည်းကန့်ကွတ်မှုတွေ မလုပ်နဲ့တော့လို့ တားမြစ်ခဲ့တာကြောင့် လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလိုလို ပြောနေကြပေမယ့် တကယ်ကတော့ သမိုင်းတွင်လောက်အောင် ညစ်ပတ်ယုတ်မာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် လူတွေမမေ့နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။
မြန်မာ့သမိုင်း ဖြစ်ရပ်အမှန် ပြုစုရေးသားရေးအဖွဲ့က ‘မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ၁၉၅၈-၆၂’ဒုတွဲစာ ၃၉၄-၄၀၁ မှာ ထိုစဉ်က သတင်းစာတွေကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ သမာဓိသတင်းစာက ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်နေ့ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၆၀ နေ့ထုတ်မှာ ဘယ်လိုရေးသလဲဆိုတော့ ယနေ့ရွေးကောက်ပွဲသည် စစ်ပြီးခေတ်တွင်
၁။ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး မဟုတ်တန်းတရား အစွပ်စွဲဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ
၂။ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော် သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း အကျိုးယုတ် အဆဲဆုံးသော ရွေးကောက်ပွဲ
၃။ အဖေနှင့်သား၊ မအေနှင့်သမီးအကွဲကြီးကြသော ရွေးကောက်ပွဲ
၄။ ညောင်မြစ်တူးပုတ်သင်ဥပေါ်သော ရွေးကောက်ပွဲ
၅။ တပည့်က ဆရာကို အံတု၊ ဆရာကတပည့်ကို အောက်ချနင်းသော ရွေးကောက်ပွဲလို့ သုံးသပ်ရေးထားသည်။
တည်မြဲ ဖဆပလ မတရားပြုကျင့်ပုံ
အဲဒီနောက် ရွေးကောက်ပွဲကန့်သတ်မှုတွေအကြောင်း ဆက်လက်ရေးသားတယ်။ တည်မြဲဖဆပလသခင်စံမြင့်နဲ့ ဗိုလ်စိုးလှိုင်တို့ တရားမဲ့ ပြုကျင့်ပါသည် ဆိုပြီး တိုင်ကြးတဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်။
သခင်စံမြင့်ဟာ အစိုးရအရာထမ်း-အမှုထမ်းများရဲ့ အကူအညီယူလျက် အစိုးရမော်တော်ဘုတ်ကိုသုံးပြီး သနပ္ပင်မြို့နယ် တည်မြဲ အဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူ မဲဆွယ်ခဲ့တာ၊ ကျုံပါကျေးရွာမှာ အရန်ရဲတွေက တည်မြဲဖဆပလအတွက် မဲဆွယ်ပြီး သန့်ရှင်းခေါင်းဆောင်တွေကို ရိုက်နှက် ခြိမ်းခြောက်တာ၊ သံဒင်းရွာမှာ သန့်ရှင်း ခေါင်းဆောင်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဆောင်ရွက်နိုင်အောင် သူကြီးက ဖမ်းထားတာ၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ ကျေးရွာကာကွယ်ရေးတွေက မဲရုံးနောက်ပိုင်း ဖောက်ပြီး မဲဆန္ဒရှင်တွေကို ခြောက်လှန့်တာ၊ တည်မြဲမဲပုံးထဲ ထည့်ခိုင်းတာ၊ မဲပုံတွေကို သနပ္ပင်ကနေပဲခူးသို့ သယ်ဆောင်ရာမှာ လမ်းခုလတ်မှာ ဗိုလ်စိုးလှိုင်က ကားရပ်ခိုင်းပြီး သနပ္ပင်ကို ပြန်လှည့်ခိုင်းတာ၊ အဲဒီနောက် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မောင်းထုတ်တာစတဲ့ အချက်တွေနဲ့ တိုင်ကြားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အလားတူ မတရားခြိမ်းခြောက်မှုတွေဟာ နယ်တော်တော်များများမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ စာရှည်နေမည်စိုး၍ ကောက်နုတ်တင်ပြခြင်း မပြုတော့ပါ။ အပြတ် အသတ်အနိုင်ရသွားတဲ့ ဦးနုကတော့ ၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှု အပြည့်အဝရှိပါသည်ဟုယူဆကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားတယ်။ (ယင်းစာ -၄၀၂)
ဦးနုကတော့ ခုလောက် အပြတ်အသတ်နိုင်ပြီးမှတော့ သူ့ဘက်က ထိုးစစ်မလုပ်တော့ဘဲ သင်ပုန်းချေရေးလမ်းစဉ်ကို ချမှတ်ခဲ့တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်မှုတွေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခိုင်းတယ်။ တည်မြဲခေါင်းဆောင် သူ့ညီလေးတွေနဲ့ ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ သည်တော့လည်း ရန်လိုတဲ့စကားတွေ မပြောတော့ဘူးပေါ့။
၁၉၅၈-၆၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးစာအုပ် ပြုစုသူပညာရှင်တွေကတော့ ခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ “၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကြီးသည် ဘက်လိုက်ခြင်း၊ မတရားပြုလုပ်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းစသော အမည်းစွန်းများ ရှိကြောင်း တွေ့နိုင်သည်” (ယင်းစာ - ၄၀၂)
၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲကို စံပြရွေးကောက်ပွဲကြီးအဖြစ် တချို့ရေးတတ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ဘက်က စံပြအဖြစ် မမြင်ပါဘူး။ ၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲစံပြဖြစ်ခြင်းကတော့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်ကွပ်ခံရ၊ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့ သန့်ရှင်းဖဆပလက ဦးနုရဲ့ဘက်တော်သား အမတ်လောင်း များကို မဲဆန္ဒရှင်လူထုက ပြတ်ပြတ်သားသား မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးတဲ့ အိမ်စောင့်အစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ ဦးနုလက်သို့ ကတိအတိုင်းအာဏာလွှဲအပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အချက်ကြီးတွေပါပဲ။
နှိုင်းယှဉ်သောအားဖြင့် ပြောစတမ်းဆိုရင် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွေက ၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့စာရင် ပို၍ လွတ်လပ်၊ ပို၍တရားမျှတမှုရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်မြင်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲဟာလည်း သမိုင်းရဲ့ မှတ် ကျောက်မှာ အရှိပကတိ အတိုင်းအတင်ခံရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အစ်မမှာ သားနှစ်ယောက် ရှိပါတယ်။
သားအကြီးက မောင်မြင့်ဆန်းအောင်(ခ) ALEXANDER နဲ့ သား အငယ်က မောင်ထိန်လင်း(ခ) KIM တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်မြင့်ဆန်းအောင် ကို ၁၂-၄-၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ကြာသပတေးနေ့မှာ မွေးဖွားပါတယ်။
မောင်ထိန်လင်းကိုတော့ ၂၄-၉-၁၉၇၇ ခုနစ်၊ စနေနေ့မှာ မွေးဖွား ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၂၃ နှစ် အထိကတော့ သားနှစ်ယောက်ကို ရင်အုပ်မကွာ ထားရှိခဲ့ပါတယ်။
အခု အချိန်မှာ သားတွေနဲ့ အနေဝေးကွာနေ ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါတလေတော့လည်း သားတွေနဲ့ အနေနီးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်သွေးတွေအပေါ် ထားရှိခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကတော့ အပြည့်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ရှင်ပြုချိန်တန်တဲ့အချိန်မှာ ရှင်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
သားတွေနဲ့ အနေ ဝေးနေသော်လည်း သားတွေရဲ့မွေးနေ့မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် မပြုလုပ်နိုင်သည့်တိုင်အောင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုတော့ ကိုယ်စားပြုလုပ်ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။
ဘာမဆို သားနှစ်ယောက်ကို အညီအမျှ ဖြစ်စေပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်အပေါ် ဘက်လိုက်ရင်လည်း မကြိုက်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ ခဏခဏ အပြောခံရပါတယ်။ အဆူခံရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်ပါပဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ တအားထားတာကိုး။ ဒါမှဒါ သူမှသူဆိုတဲ့အကျင့် ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြောပြရဦးမယ်၊ တစ်ခါတုန်းကပေါ့ဗျာ။ အစ်မရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက် လာပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း သိမှာပါ။ သူ ဆိုင်းထိုးရင် (လက်မှတ်ထိုးရင်) 'မြန်မာပြည်' ဆိုတာလေး ထည့်ထည့်ပြီး လက်မှတ်ထိုးလေ့ရှိတဲ့ လော့ဒ်မောင့်ဘက်တန် (မြန်မာပြည်)ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ အမြွှာမြေးနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ တင်မ်လို့ ခေါ်တဲ့ အစ်မမိတ်ဆွေပါ။
ကျွန်တော်တောင် သိပ်မမှတ်မိတော့ပါ။ ၁၅ နှစ်လောက်တော့ ရှိပါပြီ။ အဲဒီ အစ်မရဲ့မိတ်ဆွေက ကျွန်တော့ကို တီရှပ်လေးနှစ်ထည် လက်ဆောင်ပေးချင်တော့ အစ်မကို ပြောပါတယ်။ အစ်မက ကျွန်တော့ကို ခေါ်ပါတယ်။
"ကေအမ်အက်စ်၊ သူက လော့ဒ်မောင့်ဘက်တန်ရဲ့ အမြွှာမြေး နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ပါ။ တင်မ်လို့ ခေါ်တယ်။ သူ့မျက်လုံး တစ်ဖက်က မကောင်းဘူး။ လော့ဒ်မောင့်ဘက်တန်ကို ဗုံးနဲ့ခွဲပြီး လုပ်ကြံခံရတုန်းက သူလည်း ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူ့မျက်လုံးတစ်ဖက် ပျက်စီးသွားတယ်။ အစ်မရဲ့ မိတ်ဆွေပဲ။ သူကပြောတယ်၊ သူ ဒီကိုလာတုန်းမှာ ကေအမ်အက်စ်က အမြဲတမ်း အစ်မပုံပါတဲ့ တီရှပ် ၀တ်တာ သူတွေ့တွေ့နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကေအမ်အက်စ်ကို တီရှပ်ပေးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အစ်မပုံတော့ မပါဘူး။ ရိုးရိုးတီရှပ် ဖြစ်နေတယ်။ လက်ခံမခံ အစ်မက မေးကြည့်ပေးမယ် ဆိုလို့ အခု ကေအမ်အက်စ်ကို အစ်မ မေးတာပဲ" လို့ ပြောပါတယ်။
"အစ်မပုံမပါရင် ကျွန်တော် မယူချင်ဘူး" ပြောတော့ အစ်မက "အဲလိုမလုပ်ရဘူး။ လက်ခံလိုက်ပါ" လို့ အစ်မက ပြောတာနဲ့ ကျွန်တော် လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
အစ်မမိတ်ဆွေလည်း ပြန်သွားရော ကျွန်တော်က "အစ်မ၊ ဒီတီရှပ်နှစ်ထည်ကို ကင်မ်ကို ပေးပေးပါ"လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ အစ်မက မျက်နှာထားနဲ့ "ကေအမ်အက်စ်က သိပ်ဘက်လိုက်တာပဲ။ အစ်မမှာ သား နှစ်ယောက် မွေးထားတာ။ တစ်ယောက် တစ်ထည် ပေးရမှာ ပေါ့။ ကင်မ်ကိုပဲ ပေးရမယ်ဆိုတော့ ကေအမ်အက်စ် မတရားဘူး"လို့ ပြောတော့ ကျွန်တော် စကားပြန်ပြင်ပြီး ပြောလိုက်ရတယ်။
ကဲ ခင်ဗျားတို့သိပြီနော်။ ဘာမဆို၊ အစ်မက မျှမျှတတ စိတ်ထားမျိုးထားစေချင်တယ်ဆိုတာလေ။ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်ပဲ၊ မောင်ထိန်လင်းကို ပိုချစ်တယ်။ မောင်ထိန်လင်းက အငယ်ဆုံးလည်း ဖြစ်တာရယ်၊ အစ်မနဲ့က မျက်နှာကျရယ်၊ စိတ်ဓာတ်ရယ်က သိပ်တူပါတယ်။
လာလည်တာကလည်း စိပ်တော့ သူ့ကို အားလုံးက ရင်းနှီးကြပါတယ်။မောင်မြင့်ဆန်းအောင်က အနေဝေးတော့ စိမ်းနေသလို ဖြစ်တာပါ။
အဲ ပူပူနွေးနွေး ဘက်လိုက်တာတစ်ခု ကျွန်တော်လုပ်မိပြန်ပြီ။ အစ်မမျက်နှာထားနဲ့ ပြောမှာ ကျိန်းသေတယ်။ မကြာသေးခင်က မောင်ထိန်လင်းရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ကျွန်တော် မြန်မာတိုင်း(မ်)မှာ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ (အစ်မကို ပြန်မပြောကြပါနဲ့နော်)။
အစ်မသိရင် ကျွန်တော့ကို ပြောဦးမှာ။ "ကေအမ်အက်စ်က သိပ်ဘက်လိုက် တာပဲ။ မောင်မြင့်ဆန်းအောင် မွေးနေ့တုန်းက ကျတော့ ဘာလို့မလုပ်တာတုံး"ဆိုပြီး ပြောမှာကျိန်းသေပါပဲ။
ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်ပါပဲ။ မျှမျှတတ လုပ်ပေးပါတယ်။
အစ်မက "ကေအမ်အက်စ် မနက်ဖြန် မြင့်ဆန်းအောင် မွေးနေ့" လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ "စိတ်ချပါအစ်မ"ဆိုပြီး မွေးနေ့ကျရင် ကြာသပတေး ထောင့်မှာ ပန်းသက်စေ့ (တစ်ပွင့်ပို)၊ ရေသက်စေ့ (တစ်ခွက်ပို)၊ ဂေါပကအဖွဲ့မှာ ရွှေသင်္ကန်းအလှူတော် (ဖြတ်ပိုင်းလေး သိမ်းထားပါတယ်) လုပ် ပေးပါတယ်။
(လီလီပန်းပွင့်ရင်တောင် အစ်မက လီလီပန်းပေးပါတယ်။ မပေးရင်တော့ ကျွန်တော် နှင်းဆီပန်းအနီ၊ အ၀ါ ၀ယ်ပါတယ်။ အစ်မက "ကေအမ်အက်စ် မနက်ဖြန် ထိန်လင်းမွေးနေ့" လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ "စိတ်ချပါအစ်မ" ဆိုပြီး မွေးနေ့ကျရင် စနေထောင့်မှာ ပန်းသက်စေ့ (တစ်ပွင့်ပို)၊ ရေသက်စေ့ (တစ်ခွက်ပို)၊ ဂေါပကအဖွဲ့မှာ ရွှေသင်္ကန်း အလှူတော် (ဖြတ်ပိုင်းလေး သိမ်းထားပါ တယ်) လုပ်ပေးပါတယ်။
သားသမီးအပေါ်မှာ ထားတဲ့ မိခင်တိုင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး အစ်မမှာလည်း ရှိပါတယ်။ အနေဝေးနေလို့သာ ဖြစ်မှာပါ။
အဲ ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် မိသားစုကို စွန့်လွှတ်သင့်ရင် စွန့်လွှတ်မှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးကတော့ အစ်မတစ်ယောက် တည်းပဲ ရှိပါတယ်။ သာဓကအဖြစ်လည်း တည်ရှိနေပါတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ဝတ္တရား မကျေပွန်ခဲ့ရင်တောင်မှ နားလည်မှုပေး တတ်တဲ့၊ သိတတ်တဲ့သားတွေ အစ်မမှာ ရှိပါတယ်။
ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါမှာ ခွဲခွာ ရခြင်းရဲ့ အတိုးကို ပေးဆပ်လေ့ရှိကြပါ တယ်။ ဒီတစ်ခါက အရင်အခါတွေနဲ့ မတူတော့လို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ အတိုးဆပ်ခဲ့ရပါတယ်။ 'ပုဂံဘုရားဖူး'တဲ့။
သားအမိနှစ်ယောက်နဲ့ 'သက်တော်စောင့်' တောင်ပါသေး။ 'တပ်ချီဒို' လေ။ သူ့အမေလုံခြုံမှုကို စိုးရိမ်ရှာတယ်နဲ့ တူပါတယ်။
'မေမေ့အတွက် ဘော်ဒီဂတ်' တဲ့။ ခွေးကလေးတစ်ကောင် ၀ယ်ပေးခဲ့ တယ်။ မိခင်အပေါ်မှာထားတဲ့ သားရဲ့ မေတ္တာ။ သူ့အမေကလည်း 'တပ်ချီဒိုမှ တပ်ချီဒို'၊ အစာကျွေးရင် ကိုယ်တိုင်ကျွေးရမှ။ စည်းကမ်းနဲ့။
ဒီတစ်ခေါက် သားအမိနှစ်ယောက်ပုံက အရင်အခါတွေတုန်းကလို မဟုတ်ဘဲ လူသိပိုများ သွားပါတယ်။ ပြောသံဆိုသံ လေးတွေ ကြားရပါတယ်။
"မျက်နှာအကျက အမေနဲ့ သိပ်တူတာပဲ" ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ကဗျာလေး စပ်လိုက်ပါတယ်။
အမေနဲ့ သိပ်တူ လိုက်တာ၊
Body Guard တဲ့
အစ်မက သားနှစ်ယောက်စလုံးကို ရှင်ပြုပေးပြီးပါပြီ။
ရဟန်းခံ ပဉ္စင်းတက်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ဆုံရင် ပဉ္စင်းတက်ပြီး ရဟန်း အမ ရဟန်း မယ်တော် လို့ အစ်မကို ခေါ်ချင်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က အစ်ကို့ကို သတိရမိကြမှာ အမှန်ပါ။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, December 16, 2011 Links to this post
ရွှေည၀ါ ဆရာတော် သာဓု ပရိယတ္တိ ကျောင်းတိုက်သို့ သွားရောက်ခဲ့သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌဦးတင်ဦး သတင်းဓာတ်ပုံ
ဓာတ်ပုံများ ပြန်လည်ဝေမျှပေးသော ဒီမိုဝေယံ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
တရုတ်သံအမတ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံဟု ဘေဂျင်းဆို
(Bangkok Post သတင်းစာမှ၊ 15 Dec 2011 ရက်စွဲပါ China says its ambassador to Burma met Suu Kyi ကို Transparency Myanmar မှဘာသာပြန်ဆိုသည်)
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးနှင့် ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဘေဂျင်းအစိုးရ၏ အဆိုအရသိရသည်။ ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် Dai Bingguo သည်လည်း လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဘေဂျင်းအစိုးရကဆိုသည်။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Liu Weimin က သံအမတ်ကြီး နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းတွေ့ဆုံမှုသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အဆိုပြုချက်အရ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
“တရုတ်သံအမတ်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဆိုပြုချက်အရတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သံအမတ်ကြီးက သူမရဲ့ သဘောထား အမြင်တွေကို နားထောင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Liu Weimin ကပြောသည်။ “အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ရေး ဆိုတဲ့ မူဝါဒကိုအခြေခံပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဘက်က အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိစဉ် အတွင်း မြန်မာနှင့်တရုတ်အကြား ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုများ ရရှိလာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြာင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဟီလာရီ၏ခရီးစဉ်ကြောင့် မြန်မာ-တရုတ်ဆက်ဆံရေး ထိခိုက်မှုများ ရှိလာလိမ့်မည်ဟု ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုများ ထွက်ပေါ်နေစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယင်းသို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံ မြန်မာအစိုးရသည် တရုတ်နိုင်ငံကို အဓိကကူညီထောက်ပံ့သူအဖြစ် ယုံကြည်အားထားလျက် ရှိသော်လည်း မြန်မာပြည်သူအများစုကမူ တရုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ် မကျေမနပ်ဖြစ်လျက် ရှိကြသည်။
ရွှေည၀ါ ဆရာတော်အားအရေးယူမှု ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်စာရေးမည်
ရွှေည၀ါ ဆရာတော် သာဓု ပရိယတ္တိ ကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားပေးရန် အချက်ပါဝင်သည့် နိုင်ငံတော် ဗဟို သံဃာ့နာယက အဖွဲ့မှ သတိပေးစာ ပို့ခံရသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေး ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့နာယက အဖွဲ့ထံစာရေးမည်ဟု ဆရာတော်၏ တကာအချို့ကပြောသည်။
ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ အန်အယ်ဒီရုံးချုပ်၌ စည်းဝေးခဲ့ကြပြီး ဆရာတော် အနေဖြင့် မန္တလေးတိုင်း အန်အယ်ဒီရုံးဖွင့်ပွဲတွင် တရားဟောရာမှ ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားရသဖြင့် စိတ်မကောင်းကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့ထံသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် စာတစ်စောင် ရေးသားပေးပို့ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်ဟု မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဦးတင်ဦးက ဆရာတော်အား လာရောက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။
ယခုလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စာတစောင်ရေးသားပေးပို့မည်ဖြစ် သကဲ့သို့ ဆရာတော် အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့ထံသို့ အသနားခံစာ တစောင် ပေးပို့ရန် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရေးသားလျှက်ရှိသည်ဟု မွန်းလွဲ ၃ နာရီဝန်းကျင်တွင် ဆရာတော်အားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ရခဲ့စဉ် ဆရာတော်က မိန့်ကြားလိုက်သည်။
၎င်းအနေဖြင့် ယခုလို အသနားခံစာ တင်ရန် အကြောင်းမရှိသော်လည်း အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းသဖြင့် ယခုလိုစာတင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြီးနောက် သူတို့ဘက်က မည်သို့ ဆုံးဖြတ်မည်ကို စောင့်ကြည့် ရမည်ဖြစ်ကာ အဆိုးဆုံးတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားကြောင်း လည်း ဆက်လက် မိန့်ကြားသည်။
ယနေ့မွန်းလွဲ တနာရီတွင် နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာ နာယက အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဗန်းမော်ဆရာတော် ကြွရောက်လာမည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့၍ အရပ်သူ အရပ်သားများနှင့် ဆရာတော် တကာ တကာမများ ရာနှင့်ချီကာ ကျောင်းတိုက်သို့ လာရောက်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဗန်းမော်ဆရာတော် ကြွရောက်လာခြင်းမရှိပဲ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် ရွှေည၀ါ ဆရာတော်က ပရိတ်သတ်အား လူစုခွဲဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပြီးနောက်တွင် စုဝေးနေသူများ လူစုကွဲသွားခဲ့သည်။
တိုင်းသံဃာ့နာယက အဖွဲ့မှ တဆင့် ယမန်နေ့ညနေက ပေးပို့လာသည့် စာတွင် ဆရာတော် အနေဖြင့် မန္တလေးတိုင်း အန်အယ်ဒီရုံးတွင် တရားဟောသည့် ကိစ္စကိုရည်ညွှန်းထားကာ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်၏ ဆိုဆုံးမမှုကို မခံခြင်း တို့ကိုဖေါ်ပြပါရှိပြီး ၄၇ ပါးစုံညီ သံဃာ့နာယက အဖွဲ့ စည်းဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဆရာတော် ကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားပေးရန်၊ ဒုဗ္ဗစ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်နှင့် ယင်းကျောင်းတိုက်တွင် သံဃာ့နာယက အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ မည်သည့်သင်တန်းမှ ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိရန်တို့ ပါရှိသည်။
သတင်း..Yangon Press International
၄င်းဇာတ်ကားကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ရိုက်ကူးရန် လျာထားသတ်မှတ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ နှစ်တစ်ရာပြည့် မွေး နေ့တွင် ရုံတင်ပြသသွားမည်ဖြစ် ကာ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း ပြသ မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဇာတ်ကား၏ ဇာတ် ညွှန်းကို ပြည်တွင်းရှိ ဒါရိုက်တာ များ၊ စာရေးဆရာ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေး ဆရာအစရှိသည့်သူများမှ ရေးသား မည်ဖြစ်ပြီး စက်မှုနှင့် ဒါရိုက်တာမှာ ပြည်ပပညာရှင်များက လာရောက် ရိုက်ကူးမည်ဖြစ်သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, December 15, 2011 Links to this post
နိုင်ငံရေး ဆန်တဲ့ အနုပညာကို ပရိသတ် အတွက် ဖန်တီး ပြသွားမယ့် ဇာဂနာ
မေး..... ဦးသူရ သရုပ်ဆောင် အလုပ်၊ ဒါရိုက်တာ အလုပ်တွေ ကို သေချာ လက်မခံ ဖြစ်သေးတာ အသက် အရွယ် ကြောင့် လား။ သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကို ချိန်ဆ နေရလို့ ပါလား။
ဖြေ....... လုပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ထောင်က ထွက်လာ ကတည်းကကို တောက် လျှောက်လုပ် နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရုပ်တွေ မြင်ရဖို့ ကတော့ နည်းနည်း စောင့်ရတဲ့ သဘောပါ။ ကျန်တာ တွေ ကတော့ တောက်လျှောက် ကျွန်တော် ပြီးအောင် လုပ်နေပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း ဗိုလ် ချုပ် အတ္ထုပ္ပတ္တိ ကို မကြာခင် မြင်ရတော့ မှာပါ။
မေး...... ရေရှည်မှာ နိုင်ငံရေးဘက်ကိုပဲ အားသာသွားမလား။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရေးနဲ့အနုပညာကို တွဲပြီးလုပ် ဆောင်သွားမှာပါလား။
ဖြေ.........ကျွန်တော်ကတော့ နိုင်ငံရေးဆန်တဲ့ အနုပညာကို ပရိသတ်အတွက် ချပြမှာပါ။
မေး.....တခြားဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ အတွက်လည်း စာတွေရေးပေးနိုင်ဦး မလား။ ﻿
ဖြေ........ ရဋ၁း အခုဒီပွဲမှာ နာမကျန်းကဗျာဆရာကို လှူတဲ့စာမူခက အရင်တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ အဟောင်းတွေပါ။ ကျွန်တော်ထောင်က ထွက်လာကတည်းက မဂ္ဂဇင်း၊ဂျာနယ် တွေအတွက် မရေးရသေးပါဘူး။ ကျွန် တော်အရမ်းရေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက များခဲ့တော့ အဲဒီ အကြောင်းတွေကိုရေးမှာပါ။ ဘယ်မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်မဆို ကျွန်တော့်မှာ စာမူတောင်းခဲ့ ရင် ရေးပေးမှာပါ။
မေး... ခုလိုစာမူခ လှူဖြစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းလေးလည်း သိပါရစေ။
ဖြေ.......အခု ဒီပွဲလေးမှာ စာမူခ လှူဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်ထောင် က ထွက်လာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်က အလှူလုပ်ပါ ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်။ ကျွန်တော် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မလှူချင်ဘူး။ ကျွန်တော့်အဖေက ﻿ကဗျာဆရာဖြစ်တဲ့အတွက် ကဗျာဆရာ တစ်ယောက်ကိုပဲ လှူချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အပတ်စဉ် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စာမူခတွေကို ကဗျာဆရာ တစ်ဦးကို လှူဒါန်း ချင်ပါတယ် ဆိုတော့ ပေါ်ပြူလာ ဂျာနယ်ကပဲစီစဉ်ပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အဖေအတွက် ရည်စူးပြီး လှူ ဒါန်းတဲ့အလှူပါ။ အဲဒီအလှူမှာ သူငယ် ချင်းဖြစ်တဲ့ ကိုမိုက်တီးနဲ့ ညီအစ်ကို တစ် ယောက်လို့ ဖြစ်နေတဲ့ မြေမှုန်လွင်တို့က လည်း ပါဝင်ထားပါတယ်။ အရင်ကျွန် တော်စလှူဖို့စဉ်းစားတာလေးသောင်းပါ။ အခုတကယ်တမ်း လှူဖြစ်သွား တာကတော့ တစ်သိန်းခွဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီအလှူမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လတိုင်းလတိုင်း လည်း ဒီလိုမျိုးလှူဒါန်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွား မှာပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်ကြေးနှင့်နစ်နာကြေးပြသာနာများကြောင့် တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်(၁)အတွင်းရှိ အောင်စိန်လင်း သစ်အချောထည်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်(၁)၊ တောင်ကြီးလမ်းနှင့် ယောက်ကော်လမ်းထောင့် အမှတ် (၈၅) ရှိ အောင်စိန်လင်း သစ်အချောထည်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား (၂၂)ဦးမှ ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခွဲအချိန်တွင် နှစ်စဉ်ကြေးနှင့်နစ်နာကြေးပြသာနာများကြောင့် ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
` အလုပ်သမားတွေရဲ့ အဓိကပြဿနာက နှစ်စဉ်ကြေး ပြန်ပေးတဲ့ပြဿနာပဲ။ နစ်နာကြေးအနေနဲ့က စာချုပ်ထဲက အတိုင်း (၆) လစာပေးတယ်။ ဒါကိုကျေနပ်တယ်။ နှစ်စဉ်ကြေးကိုမကျေနပ်ကြတာပဲ။ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာလဲ အကြီးအကျယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့လိုချင်တာလေးတွေ တောင်းဆိုရုံပါပဲ´ ဟု အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနေသူ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်ကပြောသည်။
ဆန္ဒပြခဲ့ရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ စက်ရုံမှ အလုပ်သမား ၂၆ ဦးအား လုပ်ငန်းမအောင်မြင်တော့သဖြင့် အလုပ်တာဝန်မှ ရပ်စဲ၍ နစ်နာကြေးပေးရာတွင် အလုပ်သမားများမှ မကျေနပ်သဖြင့် ဆန္ဒပြခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
`ကျွန်တော်ဆိုရင် ဒီစက်ရုံမှာ လုပ်သက် ၁၄ နှစ်ကျော်ပြီ။ အဲဒါကို အလုပ်က ရပ်စဲလိုက်တော့ နစ်နာကြေးဆိုပြီး ၃ သိန်း ၁ သောင်းပဲ ရတယ်။ တစ်ချို့အလုပ်သမားတွေဆိုရင် ၂ သိန်းကျော်ကျော်ပဲရတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က နှစ်စဉ်ကြေးဆိုပြီး တစ်နှစ်ကို တစ်ထောင်စုရတယ်။ ဘယ်လောက်ရမှ ကျေနပ်မယ် ဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာ လွယ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အလုပ်သမားတွေ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေရင်ရပါပြီ´ ဟု ဆန္ဒပြမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သော အောင်စိန်လင်း သစ်အချောထည်မှ အလုပ်သမား ကိုသိန်းတိုးကပြောသည်။
အလုပ်သမားများအလုပ်စ၀င်သည့်အချိန်တွင် နှစ်စဉ်ကြေး တစ်နှစ်လျှင် တစ်ထောင်သွင်းရမည့်စည်းကမ်းချက် စာချုပ်ထဲတွင်ပါဝင်ပြီး အလုပ်မှထွက်ခွာပါက ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည့်အစီအစဉ်ကို အလုပ်သမားများမှ သဘောတူခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ၎င်းတို့၏ ဘ၀သစ်ကိုပြန်လည်စတင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါနှစ်စဉ် ကြေးအား တိုးပေးပါရန် စက်ရုံထဲတွင် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးဖုန်းမြင့်အောင်ကပြောသည်။
`သူတို့ပြဿနာက နှစ်စဉ်ကြေးဆိုတာသိရတယ်။ ကျွန်တော်ကမေးတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အလုပ်စ၀င်တုန်းက ဘာလို့ အဲဒီ့အချက်ကို သဘောတူခဲ့လဲဆိုတော့ အဲဒီ့တုန်းက အလုပ်ကလေးရှိရင် ပြီးရောဆိုပြီးတော့ သဘောတူခဲ့တာပါတဲ့။ ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ လိုအပ်တာလေးတွေလိုက်ပြီးကူညီပေးရုံပါ။ ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စကတော့ သူတို့အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားတွေပြေလည်အောင်ညှိရမယ့်အပိုင်းလေ´ဟု ဦးဖုန်းမြင့်အောင်ကဆက်လက်ပြောသည်။
အောင်စိန်လင်းသစ်အချောထည်စက်ရုံသည် လုပ်ငန်းအဆင်မပြေတော့သည်မှာ ၃ နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ယခင် အလုပ်သမား ၁၅၀၀န်းကျင်နှင့်လည်ပတ်ခဲ့ရာမှ လုပ်ငန်းမအောင်မြင်တော့သောကြောင့် အလုပ်သမားများအား တစ်ဖြည်းဖြည်းလျော့ချခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းအား အပြီးရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
`ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ စာချုပ်ထဲကအတိုင်း၊ သူတို့ ရရှိမယ့် အခွင့်အရေးအတိုင်း အားလုံးပေးပြီးသားပါ။ ပိုက်ဆံထုတ်ပြီးတဲ့သူတွေလဲ ထုတ်ပြီးသွားကြပါပြီ။ အဲဒါကိုမှ သူတို့မကျေနပ်ဘူးဆိုလို့ အခု သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေနဲ့ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နဲ့ ညှိပေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်´ ဟု အောင်စိန်လင်းသစ်အချောထည်စက်ရုံမှ မန်နေဂျာ ဦးဇော်ဝင်းကပြောသည်။
အောင်စိန်လင်းသစ်အချောထည် စက်ရုံအတွင်း ဆန္ဒပြခဲ့သော အလုပ်သမားဦးရေမှာ အမျိုးသမီး (၃)ဦး အပါအ၀င် (၂၂)ဦးရှိပြီး အဆိုပါ စက်ရုံအတွင်း မနက်(၈) နာရီခွဲမှ ညနေ (၃) နာရီဝန်းကျင်အထိ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။
သတင်းများ ပြန်လည်ဝေမျှပေးသော မြစ်မခ မီဒီယာ အားကျေဒဇူးတင်ရှိပါသည်.။
လယ်ယာထွက်ကုန်များ တရုတ်တင်ပို့နိုင်ရေး မြန်မာတောင်းဆို
တရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှ တင်သွင်းရန် ကန့်သတ်ထားသည့် မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်များဖြစ်သည့် ဆန်၊ ပြောင်းနှင့် သကြားအပါအဝင် အခြား ကုန်ပစ္စည်းများကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာဘက်မှ တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
၎င်း တောင်းဆိုချက်များကို တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားကုန်သွယ်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစည်း အဝေး၌ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များဘက်မှ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားဝင်တင်သွင်းခွင့် မရရှိသည့် အတွက် မှောင်ခိုဈေးကွက် မှာ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး မြန်မာ တောင်သူများအတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကြောင်း မြန်မာကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဘိန်းအစားထိုး ပြောင်းသီးနှံတင်ပို့မှုမှာ တစ်နှစ်လျှင် ပြောင်းတန်ချိန် လေးသိန်းမှ ငါးသိန်းအထိတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို၍ ကြီးမားလာခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် မူဆယ်၊ နန့်ခမ်း ကုန်သည်များနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ ကုန်သည်များမှာ အာဆီယံစံချိန်စံညွှန်းဖြင့် ကုန်ကားများ ကုန်တင် ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားမှုကို ပြည်လည်ဖြေလျှော့ပေးရန် တရုတ်အာဏာပိုင်များထံသို့ တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
၎င်း တောင်းဆိုချက်များကို မူဆယ်မြို့၌ ပြုလုပ်သော လက်ကားကုန်စည်ဒိုင်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကုန်သည်များမှ တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုများတွင် အာဆီယံစံချိန်စံညွှန်းများကြောင့် တန်ဆာခများ မြင့်တက်လာခြင်း၊ ယာဉ်အစီးရေ ပိုမိုသုံးစွဲရခြင်း၊ လမ်းတံတားကြေး ကောက်ခံသောဂိတ်များတွင် အချိန်ကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းကြောင့် တရုတ် အာဏာပိုင်များထံသို့ ဖြေလျော့မှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် ကုန်သည်များမှ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်အမှတ်ရရှိပါက ဒီလှိုင်းအမည်ဖြင့် စာစောင်ထုတ်ဝေရန် အစီအစဉ်ရှိ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေဖြင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်အမှတ်ရရှိပါက ပါတီသစ်ထူထောင်ပြီး နောက် ဒီလှိုင်းအမည်ဖြင့် စာစောင်ထုတ်ဝေရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါစာစောင်၏ အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှာ ဦးအုန်းကြိုင် ၊ မုံရွာအောင်ရှင် ၊ ဖျာပုံနီလုံဦးနှင့် ငြိမ်းသစ်တို့ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရသည်။
“ပါတီသစ်ထောင်ပြီးရင် အောင်နိုင်ရေးအတွက် အရင် လုပ်မယ် စာစောင်လုပ်ဖို့က စီစဉ်နေတုန်းပါဘဲ ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကုန်လုပ်ပါမယ်”ဟု ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောသည်။
စာစောင်ထုတ်ဝေရခြင်းမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြစ်သလို ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုလည်းပါပါတယ်၊ အဓိကက အောင်နိုင်ရေးကို ဦးစားပေးပြီး ပါတီတွင်း လှုပ်ရှားမှုတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် စာစောင်ထုတ်ဝေသွားမှာပါ”ဟု အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဖျာပုံနီလုံဦး က ပြောသည်။
အဆိုပါ စာစောင်တွင် ပါတီတွင်း လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းမှ အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု များနှင့် ကာတွန်း၊ဆောင်းပါးစုံလင်စွာဖြင့် ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး များသို့ ဖြန့်ချီရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က အန်အယ်လ်ဒီဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဥာဏ်ဝင်း နှင့် ဦးဝင်းမြင့်တို့မှ နေပြည်တော်သို့ သွားရောက်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် တရားဝင်ပါတီဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း သိရှိရသည်။
သတင်းများအား ပြန်လည်ဝေမျှပေးသော မြစ်မခ မီဒီယာအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) နှင့် ရွှေညဝါဆရာတော်တို့ သာသနာရေးဆောင်ရွက်မှု တားမြစ်ခံရ
ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်)နှင့် ရွှေညဝါဆရာတော် ဦးပညာသီဟ နှစ်ပါးကို နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ တားမြစ်ချက်များ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလအား ၂၀၁၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၉ရက်နေ့မှ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၈ရက်နေ့အထိ တရားဟောခွင့် ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်စာအရ သိရသည်။
“အခုထိတော့ ဘုန်းဘုန်းဆီကို ဘာညွှန်ကြားချက်မှ မရောက်သေးဘူး”ဟု ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလက ဆိုသည်။ နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့က ဦးသုမင်္ဂလကို ထေရဝါဒပိဋကတ်တော်နှင့် မညီသောစာသားများကို ထည့်သွင်းဟောပြောခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ တရားဟောကြားခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတားမြစ်ချက်ကို ဆရာတော်က မလိုက်နာပါက သံဃာအဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်ဟု အထက်ပါ ထုတ်ပြန်စာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလကဲ့သို့ သာဓုကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဖြစ်သော ရွှေညဝါဆရာတော်ဦးပညာသီဟကိုလည်း လက်ရှိသတင်းသုံးနေထိုင်သော သာဓုကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားပေးရန် ဆဋ္ဌမအကြိမ် နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာ နာယက အဖွဲ့၏အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ညွှန်ကြားလိုက်သည်။
ရွှေညဝါဆရာတော်ကို မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်တွင် တရားဟောခွင့် လာရောက်လျှောက်ထားမှုနှင့် သာဓုကျောင်းတွင် သင်တန်းများပိုချပေးနေခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်စာအရ သိရသည်။
ရွှေညဝါဆရာတော်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိ လာစဉ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ သေးသည်။
အထက်ပါဆရာတော်နှစ်ပါးသည် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ပြည်သူလူထု ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုများပြားသော ဆရာတော်နှစ် ပါးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့၏ ယခုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုသည် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် မလုပ်ဆောင်သင့် တော့ကြောင်း ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားဟောင်းတစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
မိန်းကလေးတွေ အတွက် သတိထား ကြဖို့ တင်ပေးတာပါ ရှင်
အရွယ်ကောင်း၊ ရုပ်ချော မိန်း ကလေး ငယ်များကို သွေးဆောင် ဖြား ယောင်းပြီး လိင်မှုကိစ္စ အလို့ငှာ မြှူ ဆွယ်နေသော လူပွဲစား များသည် ရန်ကုန် ကဲ့သို့သော မြို့ကြီးများ တွင် ပင် ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း လှုပ်ရှား သွားလာ လျက် အသိတရား ကိုယ်ခံ အား နည်းပါး သော မိန်းကလေးငယ် များကို မက်လုံးပေး ဆွဲဆောင် နေ ကြောင်း သိရသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, December 14, 2011 Links to this post
တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်နေသည့် နယ်စပ်ဒေသများတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ပြုလုပ်မည်
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် နယ်စပ်ဒေသများတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ တည်ဆောက်ရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် နယ်စပ်ဒေသများတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ တည် ဆောက်ခြင်းဖြင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတို့၏ လူနေမှုဘဝ တိုးတက်ရေးမြင့်မားလာနိုင်မည့်အပြင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ဆောင်နေမှုများကိုလည်း အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မူဆယ်မြို့နှင့် ရွှေလီမြို့တို့ကို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ချစ်ကြည်ရေးမြို့တော်များအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်တော့မည် ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ တင်သွင်းသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စရပ်ဆိုင်ရာ မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ကို မကြာမီ အချိန်တွင် ရေးထိုးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်း သဘောတူညီချက်လက်မှတ်၌ မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ဒေသ ဖြတ်သန်းသွားလာမှုများတွင် ပိုမိုလွတ်လပ်လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံအတွင်း အထူးစီးပွားရေးဇုန်များကို ဘားအံနှင့် မြဝတီနယ်စပ်မြို့များတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အခြားနယ်စပ်ဒေသများတွင်ပါ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါက တိုင်းရင်းသားလူနေမှု ဘဝမြင့်သွားစေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာနေသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်သူတွေ ရင်နာနေပြီ ။
အဖျား အနာ နဲ့
သနားစရာ ကောင်းတဲ့ ကလေးတွေ… ၊
အဖေပျောက် အမေမရှိ ကာ
နေစရာ ပျောက်တဲ့ ကလေးတွေ…. ၊
အမေ အဖေအို တွေကို
တွဲခေါ်ပြေးဖို့ အခြေအနေ မပေး ၊
နှစ်ဘက်ထောင် မြေမြုတ် ဗုံးတွေကြား
ကယ်လိုသော်လည်း ကယ်မရ ၊
ကာလတွေ ကြာလေ ပိုပိုဆိုး
အမျိုး ဖျောက်နေသလား ၊
ဒီလိုများ တွေးမိရင် မှားမလား
တာဝန်ရှိသူများ ဖြေစမ်းပါ ၊
အခုလို လျှောက်လှမ်းလို့ ရသလား…။
ပြည်တွင်းစစ်ကို ချက်ခြင်းရပ်ပါ ၊
ဒို့ရင်မှာ … နာနေပြီ….။
ပိုလန်နိုင်ငံသို့ NLD လူငယ်များ ပထမအကြိမ် သွားရောက်လေ့လာ
ပိုလန်နိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး အတွေ့အကြုံများကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ပါတီမှ လူငယ်များ သွားရောက်လေ့လာနေကြောင်း NLD ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“အဲဒီခရီးစဉ်ကို ဒေါ်စုက အရမ်းစိတ်ဝင်စားလို့ အချိန်နဲ့တပြေးညီ Report တင်ပေးနေရတယ်” ဟု NLD ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပိုလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဖိတ်ကြားချက်အရသွားရောက်သော အဆိုပါခရီးစဉ်သည် ပိုလန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံစဉ် အဆိုပါလေ့လာရေးခရီးစဉ်ကို စီစဉ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်သို့ NLD လူငယ် ၈ဦး လိုက်ပါခွင့်ရရှိပြီး တစ်ပတ် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လေ့လာရေးရောက်ရှိလာသော NLD လူငယ်များကို ဒီဇင်ဘာ ၁၂ရက်နေ့တွင် ပိုလန်နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီးက လေဆိပ်တွင် လာရောက် ကြိုဆိုခဲ့ပြီး လေဆိပ်၌ပင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့တွေ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အဲဒီမှာလေ့လာပြီး ဒီကိုပြန်လာရင် အသုံးချနိုင်ဖို့ လေ့လာသွားမယ်” ဟု ယင်းခရီးစဉ်တွင်လိုက်ပါသွားသူ ကိုညီညီက ပြောကြားသည်။
ပိုလန်နိုင်ငံသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးစနစ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများအပြင် ယင်းအချိန်က ပိုလန်ပြည်သူများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေး လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုလည်း လေ့လာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပိုလန်နိုင်ငံမြို့တော်ဖြစ်သော ဝါဆောမြို့သိုရောက်ရှိနေသော NLD လူငယ်များသည် ပိုလန်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် ပညာရေးစနစ်များကိုလည်း လေ့လာခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါခရီးစဉ်ကဲ့သို့သော ပြည်ပနိုင်ငံလေ့လာရေးခရီးစဉ်များကို ဆက်လက်ပြီးလုပ်ဆောင်ပေးသွားရန် အစီစဉ်ရှိကြောင်း NLD ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
NLD ပါတီသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအထိ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ပြုလုပ်နေချိန်တွင် မျိုးဆက်သစ် NLD လူငယ်များကို ပိုမိုဦးစားပေးလာကြောင်းသိရသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အား တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ပါတီဖြစ်ကြောင်း(၁၃-၁၂-၂၀၁၁)နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင်ဖော်ပြ
လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့တွင် သုဝဏ္ဍမိုးလုံလေလုံ အားကစားရုံတွင် အမျိုးသမီးအားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများရံပုံငွေဂီတ ဖျော်ဖြေရေးနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ရက်ရွှေ့ပြောင်းကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ၀န်ကြီးဆီက ပွဲpermit ရအောင်စောင့်နေတယ် ကြိုးလဲကြိုးစားနေပါတယ် ပွဲကိုတော့ မဖျက်သိမ်းဘူး သုဝဏ္ဍအားကစားကွင်းက ၀န်ကြီးက ၁၆ရက်နေ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အားကစားပြိုင်ပွဲရှိတော့ ဒီတိုင်းရင်းသားရံပုံငွေပွဲကို ကျင်းပခွင့်မပြုဘူးတဲ့ “ဟု ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားရံပုံငွေပွဲဖြစ်မြောက်ရေး တာဝန်ခံ ကိုဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား ရံပုံငွေပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်တွင် ပွဲဖြစ်မြောက်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်းနှင့် ပွဲမကျင်းပမီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။
“ပွဲကိုတော့ ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်မှာပါ ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်လောက်မှာ ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်၊ ပွဲ မလုပ်မီ ၂၀ရက်နေ့ဝန်းကျင်လောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်အုံးမှာပါ” ဟု၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
၂၀၁၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် သုဝဏ္ဍမိုးလုံလေလုံအားကစားရုံ တာဝန်ခံမှ တိုင်းရင်းသားရံပုံငွေပွဲပြုလုပ်ကျင်းပ ရန် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄/၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းရရှိနိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးမှ အမျိုးသမီးအားကစားပွဲနှင့် ရက်တိုက်နေ သည့်အတွက် ခွင့်မပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ တိုင်းရင်းသားရံပုံငွေပွဲသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးတာဝန်ခံမှာ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဖြစ်သည်။
သတင်းများအားပြန်လည်ဝေမျှပေးသော မြစ်မခ မီဒီယာ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
အချိန်က နေ့လယ် ၁၂ နာရီခန့် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ဒေါပုံမြို့နယ်ထဲက ကားမှတ်တိုင်တခုမှာပါ။ ကားမှတ်တိုင်မှာ ဘတ်စ်ကားတစီးထိုးစိုက်လိုက်တိုင်း ကားနားကိုပြေးကပ်သွားပြီး ဈေးရောင်းနေ တဲ့ ဈေးသည်အများစုဟာ ဌေးဌေးတို့ အရွယ် အသက် ၁၀ နှစ် ၀န်းကျင် ကလေးတွေဖြစ်နေတတ်တာများပါတယ်။
ဈေးဗန်းကလေးတွေကို ရွက်ရင်း အရှိန်မသေသေးတဲ့ ကားဘေးကနေသူ့ထက်ငါ အလုအယက် အော်ပြီး ရောင်းနေ တဲ့ ဌေးဌေးတို့လို ခေါင်းရွက်ဗျပ်ထိုးကလေးဈေးသည် တွေဟာ ခုလို နေပူပူ၊ ကားကျဲကျဲဖြစ် တဲ့နေ့လယ်ခင်းပိုင်းတွေမှာသာ လိုင်းကားတွေ နားကပ်ပြီး ဈေးရောင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
စည်ပင်သာယာဥပဒေအရ ဘက်စ်ကားမှတ်တိုင်တွေ မှာ ဈေးရောင်းခွင့်မရှိသလို၊ခေါင်းရွက် ဗျပ်ထိုး ဈေးသည် တွေကိုလည်း ကားတွေအနား ကပ်ပြီး ဈေးရောင်း ခွင့်မရှိပါဘူး၊ တွေ့ခဲ့ရင်လည်း ဈေးဗန်းသိမ်းတဲ့အပြင် ဒဏ် ငွေဆောင်ရကြောင်း ဈေးသည်များထံမှ သိရပါတယ်။
ခုလို နေမင်းခေါင်းတည့်တည့်ရောက်နေချိန်မျိုးမှာသာ အဖမ်းအဆီးနည်း ပါးတဲ့အတွက် ဌေးဌေး တို့လို ခေါင်းရွက်ဗျပ်ထိုးဈေးသည်တွေဟာဘတ်စ်ကား ဂိတ်တွေနားမှာ မယောင်မလည် ရပ်ရင်းကနေ ဈေးခိုးရောင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို အရှိန်မသေသေးတဲ့ ကားတွေနားပြေးကပ်သွားတဲ့အခါတိုင်း ကား ဘီးကြီးတွေအောက် မှာ ခြေထောက်ဝင်မသွားအောင်လည်း သတိထားရတဲ့အကြောင်းဌေးဌေး က ပြောပြပါတယ်။
သင်္ယန်းကျွန်းကနေ ဈေးလာရောင်းတဲ့ ဌေးဌေးဟာ အိမ်ကနေ မနက်ကတည်းကထွက်ခဲ့ပြီး ဒီကားဂိတ် အရောက်လမ်းတလျှောက်လုံးဈေးရောင်းလာရတာဖြစ်ကြောင်း ၊ ကန်စွန်းဥပြုတ် ၁ ခု ကို ၁၀၀ ကျပ်ဈေးနဲ့ ရောင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ပါလာသမျှ အကုန်ရောင်းရတဲ့နေ့တောင်မှ ကျပ် နှစ်ထောင် ကျော်လောက်သာရလေ့ရှိပြီး ဈေးရောင်းပါးတဲ့နေ့များဆို ကျပ် ၁၀၀၀ ပြည့်အောင်ပင် မနည်းရောင်းရကြောင်း သူမကပြောပြပါတယ်။
ဒီကားဂိတ်လေးမှာ ဌေးဌေးဟာ နေ့လယ် ၁၂ နာရီကနေ ညနေ ၃ နာရီလောက်ထိပုံမှန်ရောက် လာပြီး ဈေးရောင်းပါတယ်။ သူမဟာ မောင်နှမများတဲ့ မိသားစုဝင်တဦးဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းမနေနိုင်ဘဲ အိမ် မှာအမေကိုကလေးကူထ်ိန်းပေးရပါတယ်။ ခုလို ရာသီအလိုက် ရာသီစာရောင်းခဲ့တာခုဆိုလျှင် ၃ နှစ်ရှိပြီ လို့ သူမက ညည်းညူပါတယ်။
အဲဒီ သိန်းစိန်ဆိုတဲ့ ပိန်ကပ်ကပ်နဲ့ကလေးဟာ အိမ်ကို တနေ့ ငွေ ၃၀၀၀ အပ်ရကြောင်း၊ အဲဒီ ငွေ ၃၀၀၀ ရဖို့အတွက် သိန်းစိန်ဟာဈေးရောင်းတဲ့ အလုပ်အပြင် တခြားအလုပ်တွေကိုပါ လုပ်နေရကြောင်း၊ ငွေ ၃၀၀၀ ပြည့်အောင် မရှာနိုင်တဲ့နေ့ဆိုရင် သိန်းစိန်တယောက် အိမ်မပြန်ရဲလို့ လျှောက်သွားနေ ရကြောင်း ဌေးဌေးက ပြောပြပါတယ်။
ပြည့်တန်ဆာ လိုချင်တဲ့သူတွေကို ပြည့်တန်ဆာရှာပေးရင် ပြည့်တန်ဆာဆီက ငွေ ၅၀၀ ကျပ်နဲ့ ရှာခိုင်းတဲ့သူ ဆီက ပေးတဲ့ ငွေကြေးအနည်းအကျဉ်းကိုရတတ်တဲ့အပြင်၊ အဲဒီကားဂိတ်အနားက တည်းခိုခန်းတွေ ဆီကို ခေါ်သွားပေးရင်လည်းတည်းခိုခန်းက သိန်းစိန်ကို တခါခေါ်လာ ကျပ် ၂၀၀ နှုန်း ပေးတဲ့အတွက် သိန်းစိန်ဟာ ငွေရှာတော်တဲ့ ကလေးတယောက်အဖြစ် ကလေးဈေးသည်တွေကြားမှာနာမည်ကြီးပါ။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ အချို့မြို့နယ်များတွင် မောင်ကောင်း၊ စံလင်း၊ ရှမ်း အစရှိသည့် ရှားပါးပိုက်ဆံများကို ဈေးကောင်းပေးဝယ်ယူလျက်ရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါသော ပိုက်ဆံများကို အ၀ယ်လိုက် လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှားပါးပိုက်ဆံဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သို့ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း မှာ ဈေးကွက်တစ်ခု အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ လာကြောင်း ငွေကြေး အဟောင်းဈေးကွက် အတွင်းမှ သိရှိရသည်။
မောင်ကောင်း စံလင်း ပိုက်ဆံများအပြင် ရှားပါးပိုက်ဆံဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင် ထုတ်ဝေသုံးစွဲခဲ့သော အဖိုးကြီးပုံနှင့် လူငယ်ပုံပါသော ပိုက်ဆံနှစ်မျိုးမှာလည်း ကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းဝန် ကျင် ဈေးရှိကြောင်း ဈေးကွက် အတွင်းမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
သတင်းများ ပြန်လည်ဝေမျှပေးသော မြစ်မခမီဒီယာ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီ မရှိဘူး ရှိတယ် (မောင်ဝံသ)
မြန်မာပြည်က နိုင်ငံရေးပါတီတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီ ဘယ်လို ကွဲပြားသလဲ၊ ဘယ်အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီကို လက်ခံတာ များသလဲ စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို နိုင်ငံခြား သားမိတ်ဆွေတချို့က မေးလာ တဲ့အခါ ကျွန်တော် အတော်ဖြေရကျပ်တယ်ဗျ။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေး ပါတီတွေထဲမှာ ဘယ် သဘောတရားကို ခံယူကျင့်သုံးပါတယ်လို့ ဂဃနဏ ကြေညာတဲ့ ပါတီ အတော်နည်းပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကတော့ ကွန်မြူနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ ဆိုရှယ် ဒီမိုကရက်၊ ဖေဘီယန်၊ လစ်ဘရယ်၊ လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်၊ ဖက်ဆစ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ စသဖြင့် အယူဝါဒ သဘောတရားတွေကို သန်ရာသန်ရာ လက်ခံခဲ့ကြတယ်။
၁၉၆၂ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီတည်ထောင်တဲ့အခါ အခြားဆိုရှယ်လစ်များနဲ့ တစ်မူကွဲပြားစေဖို့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်လို့ ကြေညာတယ်။ သဘောတရားခံယူချက်အဖြစ် လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တို့၏ အညမည သဘောတရားဆိုတာကို စီမံ ဖော်စပ်ပြီး ပါတီရဲ့ လမ်းညွှန်သဘောတရား အဖြစ် ထုတ်ပြန် ကြေညာတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအာဏာရ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကြီး ဖြစ်တဲ့ ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအယူဝါဒဟာ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒဂိုဏ်းဂဏများစွာအနက် ဒီမိုကရက်တစ် ဆိုရှယ်လစ် (၀ါ) ဆိုရှယ် ဒီမိုကရက်ဝါဒကို ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့က နှစ်သက် လက်ခံတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ နီးစပ်သလဲဆိုရင် ဂျာမနီက ၀ီလီဘရန့်တို့နဲ့ နီးစပ်တယ်။ သဘောကတော့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံပိုင်မသိမ်းဘဲ ပုဂ္ဂလိကများကို အစိုးရ ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကတော့ မာ့ခ်စ် လီနင်ဝါဒကိုပဲ လက်ခံတယ်။ ယခင် ဆိုဗီယက်အုပ်စုဝင်နိုင်ငံများ၊ ကျူးဘား၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားတို့လို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့ ဦးဆောင်သွားရတဲ့ စနစ်ပါ။
ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ဖဆပလက ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက် ဖဆပလရဲ့ အဓိက ကြိုးကိုင်ပါတီဟာ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့ကို လက်ယာဆိုရှယ်လစ်တွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီမှာ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဦးဗဆွေတို့လို လက်ယာဆိုရှယ်လစ်တွေက ကြီးစိုးနေချိန်မှာ ဒုတိယတန်း ခေါင်းဆောင်စုထဲက လက်ဝဲဆိုရှယ်လစ်တွေဖြစ်တဲ့ သခင်ချစ်မောင်၊ သခင်လွင်၊ သခင်လှကျွေတို့က ခွဲထွက်ပြီး အလုပ်သမား လယ်သမားပါတီတည်ထောင်တယ်။ နောင်အခါ သူတို့ကို ဆိုရှယ်နီတွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ် အနီတွေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ပေါ်အောင် သတင်းစာတွေက ပေးခဲ့တဲ့ နာမည်ပါ။
ဖဆပလထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ အင်အားစုတွေအနက် လက်ယာဆိုရှယ်လစ်တွေနဲ့ ဦးနုခေါင်းဆောင်တဲ့ အပျော့စား ဆိုရှယ်လစ်တွေနဲ့ ကွဲကြပြန်တယ်။ (ဦးနုဟာ စစ်ကြိုခေတ်က ဖေဘီယန်ဆိုရှယ်လစ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ထိုစဉ်က နု-တင်အဖြစ် ဦးနုနဲ့တစ်တွဲတည်း ရှိခဲ့တဲ့ သခင်တင်က ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းအာဏာသိမ်း ထားတဲ့ခေတ်မှာ ]]တိုးတက်သော ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ}} ဆိုတဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင် ဆိုရှယ်လစ် သဘောတရား အဖွင့်ကျမ်းတစ်စောင် ရေးခဲ့သေးတယ်။)
ဖဆပလ အဖွဲ့တွင်းအကွဲကို ပါလီမန်မှာ မဲခွဲပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ ဆွေငြိမ်းက နုတင်ကို အယုံအကြည်မရှိအဆိုတင်ပြီး မဲခွဲတဲ့အခါ ပမညတ ခေါ် ဆိုရှယ်နီတွေက အပျော့စားဆိုရှယ်လစ်၊ ဦးနုကို ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ဟာ သဘောတရားရေးခံယူချက်နဲ့ ဦးနုကို ထောက်ခံမဲပေးတာထက် သူတို့အပေါ် ဗိုလ်ကျခဲ့တဲ့ ဆွေငြိမ်းကို လက်စားချေချင်တာနဲ့ ဦးနုဘက်က ရပ်ခဲ့ကြတာလို့ ရှုမြင်သူတွေရှိပါတယ်။
အဲဒီဖြစ်ရပ်မှာ ဦးနုဟာ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ ထောက်ခံမဲနဲ့ အနိုင်ယူသွားတယ်ဆိုပြီး ဆွေငြိမ်းက စွပ်စွဲတယ်။ (သူတို့က ဆိုရှယ်နီတွေကို ကွန်မြူနစ်တွေလို့ စွပ်စွဲတတ်တယ်။) အဲဒီနောက် ဆွေငြိမ်းတွေရှုံးနိမ့်တာကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်တဲ့ စစ်တပ်က ၀င်လာတော့တယ်။ ဦးနုကို အကျပ်ကိုင်ပြီး အာဏာလွှဲခိုင်းတယ်။ သည်လိုနဲ့ အိမ်စောင့်အစိုးရအသွင်နဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်များက တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တော့တာပါပဲ။ သူတို့မှာ အဲဒီတုန်းက သဘောတရား မရှိဘူး။ ငါးပွက်ရာ ငါးစာချပြီး ပြုပြင်ရေးတွေချည်း လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၆၂ ဒုတိယအကြိမ် အာဏာယူတော့မှ အညမညသဘောတရားနဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဘက်ခေတ်မှာ သဘောတရားဆိုတာ အရေးမပါတော့တာတော့ အမှန်ပါ။ ဖရန့်စစ်ဖူကူးယာမတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင် အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီခေတ် ကုန်ပြီလို့ ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ အသစ်အသစ် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကို မျက်ခြည်မပြတ် လေ့လာ အမီလိုက်ပြီး နေသွားကြရမတဲ့။ ဟိုကွေ့ရောက်ဟိုတက်နဲ့လှော်၊ ဒီကွေ့ရောက် ဒီတက်နဲ့လှော်ဆိုတဲ့ လက်တွေ့အကျိုးမျှော် ၀ါဒ (pragmatism) ကို အားပေးလာကြတယ်။ လက်တွေ့နိုင်ငံရေး (real politics) သဘောတရားကို သဘောတရားမှန်း မသိ နားမလည် လက်မခံဘဲ ရှုပ်ထွေးနေသူတွေလဲ ရှိပါတယ်။
အိုစမာဘင်လာဒင်ရဲ့ နောက်လိုက် တပည့်တွေဟာ အဲသလိုပဲ သူတို့ကို သဘောတရားတွေ သွတ်သွင်းပေးနေမှန်းမသိဘဲ လက်ခံခဲ့ကြရ တာ ဖြစ်တယ်။ အဲသလို လူတွေဟာ အကြမ်းဖက် မျိုးဆက်သစ်တွေအဖြစ် ရှင်သန်နေကြတာပဲ။
အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တားဆီးဖို့ အမေရိကန် အပါအ၀င် အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေက လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေ တင်းကျပ်သထက် တင်းကျပ်ပြီး ကာကွယ်နေ ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အိုစမာဘင်လာဒင် ကိုတောင် ၁၀နှစ်ကြာမှ အသေမိခဲ့တယ်။ အမေရိကန်တွေက အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ချေမှုန်းပစ်ရမယ်လို့သာ ပြောနေတာ၊ တကယ်တမ်းကျတော့ မချေမှုန်းနိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အကြမ်းဖက်သမားတွေက သဘောတရား တပ်ဆင်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ သဘောတရားကို သဘောတရားနဲ့ပဲ ချေဖျက်ရမှာ။ တစ်ပွဲထိုး ချေမှုန်းရေးလုပ်ရုံနဲ့ အမြစ်မဖြတ်နိုင်ပါဘူး။
ကမ္ဘာကျော်ပညာရှင်တွေက အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီခေတ် ကုန်ပြီလို့ ပြောတယ်ဆိုတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းညိတ်ရမှာလား။ ကျွန်တော်ကတော့ နေရာတကာမှာ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီမပါဘဲ လုပ်လို့မရဘူးလို့ ယုံကြည်တယ်။ အခုပဲ ကြည့်ပါ။ အိုစမာဘင်လာဒင်စတင်လှုပ်ရှားစဉ်က သူတို့နောက်လိုက် တွေကို တာလီဘန်တွေ လက်ထက် အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ သင်တန်းတွေ ပေးခဲ့တယ်။ ဘဘောတရားလက်နက် တပ်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ သဘောတရားလဲဆိုတော့ မြင့်မြတ်သောသေခြင်း ဖြင့် အသက်စွန့်ဝံ့တယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကို ရင်ထဲ အသည်းထဲက ယုံကြည်လာအောင် သွတ်သွင်းပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ သွတ်သွင်းထားတဲ့ ယုံကြည်ချက် အတွက် အသေခံ လှုပ်ရှားခိုင်းတာပါ။ တယူသန်ဘာသာရေး မှိုင်းတိုက်တာဟာ သဘောတရား တပ်ဆင်ပေးတာပဲဗျ။
အဲဒီတော့ ဒီသဘောတရားကို ဘယ် သဘောတရားမျိုးနဲ့ ချေဖျက်မလဲဆိုတာကို မကြိုးစားခင် သူတို့သွတ်သွင်းခံရတဲ့ သဘောတရားဟာ မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကို အသေခံဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ စစ်သွေးကြွလေးတွေ အမြင်မှန်ရအောင် လုပ်ပေးရပါတယ်။
ဗုံးခွဲပြီး လူတွေသေအောင်လုပ်တာဟာ ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သူတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ အယူဝါဒဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်တိုင်က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထိထိရောက်ရောက် ပြောပြကြတယ်။ အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကို သတ်ရုံနဲ့လည်း သူတို့မုန်းတီးတဲ့ နယ်ချဲ့နိုင်ငံကြီးတွေ ဘာမှလှုပ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ အသိတရား ၀င်လာအောင် လုပ်ရပါတယ်။
အဲဒီနောက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ မှိုင်းတိုက်ခံထားရတဲ့ အယူဝါဒမှားကြောင်း ပြောတာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ မှန်တဲ့ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီ ဘာလဲဆိုတာကို ပြဖို့လည်း လိုဦးမယ်။
မှန်တဲ့ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံဖွဲ့စည်းမှုစနစ်တွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေ ရှိနေတဲ့အကြောင်း၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ လူဖြစ်လာရင် အရည်အချင်း အလျောက် တိုးတက်နိုင်တဲ့ လူမှုရေးစနစ်တွေ ရှိတဲ့အကြောင်း သူတို့သိအောင် လုပ်ပေးရမယ်။ ဗဟုဝါဒဟာ အကြမ်းဖက်ဝါဒအပါအ၀င် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ ကြံရွယ်နေတဲ့ အခြားဝါဒတွေကို သဘောတရားအရ ကောင်းကောင်းချေချွတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၇၊၊ ၁၂၊ ၂၀၁၁
ဒေါ်အောင်ဆနးစုကြည်နှင့် အနုပညာရှင်များ တွေ့ဆုံမှု အပေါ် ဝေဖန်စာများမပြုသင့် ဟု
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ဒီဇင်ဘာ ၃ရက်နေ့မှာ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များနဲ့ အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များ အတော်အသင့် စုံညီစွာလာရောက် တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြပြီး ၂ဝ၁၅ဗိုလ်ချုပ်ရာ ပြည့်အမီ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမယ့် အကြောင်းဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါ တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ”ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိက မခြွင်းမချန် မကွယ်မဝှက်ဘဲနဲ့ ထွက်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားပဲ။ ဒီ အတွက်လည်း ဘယ်နေရာက ပံ့ပိုးရ၊ ပံ့ပိုးရ ကူညီသွားမှာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်ကားရိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် မလို ဘူး။ သရုပ်ဆောင်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြော တာ မဟုတ်ဘူး။ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေ ရေးသော်လည်း ကောင်း၊အခြား အမေစုခိုင်းမယ့် ဘယ်နေရာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဇာတ်ကားကြီးထွက်ရှိရေး အတွက် ဘယ်နေရာကပဲ ခိုင်းခိုင်း တာဝန်ကျေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒ ပြင်းပြင်းပြပြရှိတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆိုတာကို နောင်လာ နောက်သားကလေး လေးတွေကို သိရှိစေချင်တယ်။ အာဇာနည် နေ့ဆိုတာတောင်မှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုက တဖြည်းဖြည်းလျော့လာတယ်။နောက်ကလေး တွေဆို သိပ်တောင်မသိတော့ဘူး။ အာဇာ နည်နေ့ပြီးသွားတာ ဘာနေ့ပြီးသွားမှန်းတောင် သူတို့မသိတာဖြစ်လာတော့ ဒါလေး တွေက ပြန်ဖော်ထုတ်ဖို့ လိုကိုလိုအပ်တဲ့ အတွက် ဝိုင်းကူသင့်ပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘဝအကြောင်း ရိုက်ကူး မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ သာမက၊ ကမ္ဘာမှာပါပြသမယ့် ဇာတ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် World wide လူတွေရိုက် မှ ပိုပြီးအဆင့်မီတယ်လို့ ပြောတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ”ဒီဇာတ်ကားက World wide သွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် World wide က လူတွေ ဦးဆောင်ကြမှပဲ အဆင့်မီဖို့ပိုပြီး အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ အစ်မတို့ မြန်မာတွေ ကို အထင်သေးပြီး ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာတွေလည်း စိတ်ဓာတ်တွေရော၊သတ္တိ တွေရော အများကြီးရှိကြပါတယ်။ အတွေ့ အကြုံအားဖြင့် World wide အတွေ့အကြုံ ကတော့ ဈေးကွက်ဝင် World wide ဖြစ်နေပြီးသား လူတွေဆီကအကူအညီတွေလို လိမ့်မယ်၊၊ အဲဒါကြောင့်အမေစုက နိုင်ငံခြားက ပညာရှင် တွေကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ တာဝန်ယူထားတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်”လို့  ပြောပါတယ်၊၊ ထွန်းအိန္ဒြာ ဗိုက သူမလေးစားယုံကြည်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထဲ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပါဝင်ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို စရောက်လာ တဲ့အချိန် ကစပြီး ဒီနေ့အချိန်ထိ လေးစားရင်ခုန် နေသူပါ။ ဂီတ အနုပညာရှင်များနဲ့အတူ ဇာတိ သွေး၊ ဇာတိမာန်တက်ကြွစေမယ့် သီချင်းစီးရီးခွေ စီစဉ်မှာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၅ရက် နေ့ မှာ အခွေရန်ပုံ ငွေပွဲမှာလည်း ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ပါဝင်သီဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အနုပညာရှင်များ ခုလို တွေ့ဆုံကြရတဲ့အတွက် တအားဝမ်းသာ ပြီး အဲဒီ အပေါ် ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ”အနုပညာသမားအားလုံးက အမေစုကို ရှေးကတည်းက လူတိုင်းလေးစားပြီးသားပဲ။ တွေ့ခွင့်ရတာ၊ မရတာတစ်ပိုင်းပေါ့။ တွေ့ခွင့်ရ မှတွေ့တယ်။ တွေ့ခွင့် မရခင်ကမတွေ့ဘူး ဆိုပြီး ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှုတွေကို မပြော သင့်ဘူးလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ အင်တာနက်တွေ ပေါ်မှာ ပြောနေ တာ တွေ့လို့ပါ။ အမေစုကို အနုပညာလောက က ဂီတရော၊ရုပ်ရှင်ရော၊သဘင်ရော တစ်ပြည်လုံးက လေးစား ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြ တာကတော့ လုံးဝငြင်းပယ်လို့မရတဲ့ အချက်ပါ” လို့ အနုပညာရှင်များနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်တွေ့ဆုံမှုအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, December 13, 2011 Links to this post
လွမ်းလျလို့ ရေးလိုက်တဲ့ စာ
၁၉၉၁၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ကျမတို့တွေရဲ့ အသက်တွေလည်း ၄၀ ကျော်တွေ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ၁၉၉၁ တုန်းက ကျမတို့တွေရဲ့ အသက်က ၂၀ ကျော်ဝန်းကျင်တွေပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျမတို့က တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပေါ့။ အန္တရာယ် ဘယ်လောက်ကြီးကြီး မမှုတတ်တဲ့ အရွယ်တွေလေ။ တုံးဆိုရင်တိုက်၊ ကျားကိုက်ရင်လဲ မကြောက်တတ်တဲ့ အရွယ်၊ ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခံစားချက်ကို အဓိကထား ပေါက်ကွဲတတ်သူတွေပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျမတို့ ကျောင်းသားတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဗယ်ဆုရတဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ပေါက် ကွဲလိုက်ကြပါတယ်။
၁၉၉၁၊ အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေဖြစ်တဲ့ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဲဒီနှစ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင်အဖြစ် ရွေးချယ် လိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါ တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေ အတော်ကို ပျော်ရွှင် ဝမ်းမြောက်ကြပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲက မျှော်လင့်ချက် ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပါ။
ကျမကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားစပ်မိတော့ သူငယ်ချင်းတွေက မေးကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ နိုဗယ်ဆုကနေ ရရှိတဲ့ ငွေကြေးတွေကို ဘယ်လို သုံးစွဲမလဲတဲ့။ ကျမက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ဒီငွေတွေကို သုံးမယ်လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တာကို မှတ်မိနေပါတယ်။ ဘယ်သူတွေကပြောလို့ ကျမသိခဲ့ရတယ်ဆိုတာတော့ မမှတ်မိပါ။ ကျမစိတ်ထင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိသားစုက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ပါပဲ ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်း စောအယ်ထူးဆိုတဲ့ နွမ်းပါးတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ဒေါ်စု ထောက်ပံတဲ့ အထဲမှာ သူတို့ပါရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ ပြောခဲ့တာကို သတိရမိပါတယ်။
၁၀ ဒီဇင်ဘာရဲ့ အကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီမတိုင်ခင်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ကို ပြောပြမှပဲ ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD က အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ စစ်တပ်က အာဏာ မအပ်လေ တော့ ပြည်သူတွေရော၊ ကျောင်းသားတွေပါ န.ဝ.တကို မကျေနပ်ခဲ့ပါ။ အဲဒီအချိန်ကထောင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေက ရက် ၁၀၀ ပြည့်ပြီးချိန်မှာ အာဏာမအပ်တဲ့ အတွက် Black September လို့ခေါ်တဲ့ ထောင်တွင်း ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကို ဆင်နွဲခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက ဆန္ဒပြသူတွေကို ရိုက်နှက်၊ ညှင်းပန်းပြီး ထောင်တွေ ပြောင်းခဲ့တာကြောင့် ဆန္ဒပြပွဲကို ရပ်တန့်လိုက်ရပေမဲ့ အားလုံးရင်ထဲမှာ မကျေနပ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရတယ်လို့ သတင်းကြားတော့ ထောင်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ရဲဘော်တွေက အပြင်ကလူတွေ အနေနဲ့ တိုက်ပွဲခေါ်ဖို့ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ်သတင်းစာ၊ ကြေးမုံသတင်းစာတွေရဲ့ ဆောင်းပါးရှင်ကဏ္ဍကနေ နိုဗယ်ဆုရရှိတဲ့ ဒေါ်အောင်
ဆန်းစုကြည်ကို နေ့စဉ် တိုက်ခိုက်နေသလို နိုဗယ်ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကိုလည်း ၂၀ ရာစုနယ်ချဲ့နည်းနဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ သြဇာသက်ရောက်အောင် လုပ်နေတယ် ဆိုတာမျိုးတွေကို ရေးသားနေတဲ့ အချိန်ပါ။
နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတချို့ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဗယ်ဆုရလိုက်တဲ့ အတွက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုလိုက်တာ ဖြစ်ပေမဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ အရှိုက်ကို ထိုးလိုက်တာမို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွတ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ကောလာဟာလ သတင်းတွေ ထွက်လာပြန်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို နိုဗယ်ဆုကို လက်ခံဖို့အတွက် နိုင်ငံခြားကို ထွက်ခွင့်ပြုမယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်မလာရတော့ဘူးလို့ သွားပြောတယ်တဲ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ကတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြင်ပကို ထွက်ခွာသွားမှာတော့ မဟုတ်ဘူး လို့ ပြန်ပြောတယ်တဲ့။ သာမန်ပြည်သူဖြစ်တဲ့ ကျမတို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ် တန်ဖိုးထားမှုကို ကြည်နူး ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က ပြည်သူပြည်သားတိုင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဗယ်ဆုရရှိတဲ့ အပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စား နေကြသလို ဘာတွေများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေမလဲ ဆိုတာကို အမျိုးမျိုး တွေးဆနေကြပါတယ်။ ကျမတို့က ထောင်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဆန္ဒကို သိရတော့ ကျမတို့လည်း လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုကို လုပ်ဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြလာပါတယ်။ ဒီ ၁၀ ဒီဇင်ဘာပွဲမှာ ကျမက ပါဝင်သူတစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီစဉ်သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီဇင်ဘာလဆန်းလောက်မှာ ကျမကို ကျမရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ ရီရီထွန်းက မေးပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျောင်းထဲမှာ ပွဲတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လို ဝင်ရောက် ပါဝင်မလဲတဲ့။ ရီရီထွန်းက ကျောက်တံတား မြို့နယ် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကပါ။ ကျမကတော့ မဆိုင်းမတွပဲ ပါမှာပေါ့၊ ဘယ်လိုနေရာကဖြစ်ဖြစ် အဓိကက ပွဲစီစဉ်နိုင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောပြီးတဲ့ နောက်နေ့ကစပြီး ကျမ၊ ရီရီထွန်းနဲ့ ကျောင်း ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ တော်လှန်ရေးအုပ်စုတွေဟာ R.C ထဲမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အားကစားပွဲတွေဆီကို နေ့တိုင်းသွားပြီး အော်ဟစ် အားပေးနေပါတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်က ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို လှုပ်ရှားလာမလဲ ဆိုတာကို စောင့်နေပေးတာပါ။
ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၆ လောက်ရောက်တော့ အားကစားပွဲတွေမှာ ကျောင်းသားတချို့က ဘာမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သံရှည်စွဲပြီး အော်နေတာတွေ ရှိလာပါတယ်။ ကျမတို့ကလည်း အားပေးတဲ့ အနေနဲ့ နောက်ကနေ လိုက်အော်ပေး တာမျိုးတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ ကျမသူငယ်ချင်း အိန်ဂျယ်က “နင်တို့ လျှောက်အော်နေ၊ တော်ကြာ အော်နေတဲ့ သူတွေ က ငထောက် (စစ်ထောက်လှမ်းရေး) တွေ ဖြစ်နေဦးမယ်” တဲ့။ ကျမတို့ကတော့ “အို.. ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးပါဘူး၊ အရေးကြီးတာက အသံထွက်နေဖို့ပဲ မဟုတ်လား” လို့ ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၈ ရက်လောက် ရောက်တော့ အားကစားပွဲတွေကို အားပေးတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ပိုများလာ ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေက R.C ခေါင်မိုးက ထုတ်တန်းတွေပေါ် တက်ပြီး လင်းကွင်းတွေ တီးကြ၊ စလောင်းဖုံးတွေ တီးကြ၊ အော်ကြ၊ ဟစ်ကြနဲ့ အားပေးပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ကျောင်းသားအားကစားပွဲတွေ ဆိုတာက အမြဲတမ်း ဒီလိုပဲ အားပေးနေကြပါပဲ။
ဒီလိုအချိန်၊ ဒီလိုရာသီမှာ ကျောင်းသားအားကစားပွဲတွေကို ကျင်းပပေးတဲ့ မော်ကွန်းထိန်း အပါအ၀င် တက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေက ကျောင်းသားတွေကို အာရုံလွှဲတဲ့ သဘောလို့ ကျမတို့ ထင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အာရုံက ကျောင်းအားကစားပွဲတွေပေါ်မှာပဲ ရှိနေအောင်လို့ အဲဒီနေ့တွေမှာ ပွဲစဉ်တွေကို ကောင်းအောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာတော့ ရူပဗေဒ ဂုဏ်ထူးတန်းက ကျောင်းသားတစ်ဦး အဖမ်းခံရပါတယ်။ ကျောင်းသား အားကစားပွဲတော်အတွင်းမှာ ဆန့်ကျင်ရေးစာဝေတာကြောင့် ထောက်လှမ်းရေးက နောက်ကလိုက်ပြီး ဖမ်းတာပါ။ အဲဒီ ကျောင်းသားနံမည်က ဘိုဘိုဟန်ပါ။ ဘိုဘိုဟန်က ထွက်ပြေးတော့ သူ့ကို ဝိဇ္ဇာကန်တင်းနားမှာ သူခိုးလို့ အော်ပြီး ဖမ်းခဲ့တဲ့ အကြောင်း ကျောင်းသားထုကြားထဲမှာ ပျံ့လွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ အားကစားပွဲတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
ကျမတို့ ပထမ စီစဉ်ထားတာက အားကစားပွဲတော်မှာ အားပေးနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဆွဲချမယ်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အားကစားပွဲတွေကို ရပ်လိုက်ပြီဆိုတာ သိတော့ ကျမတို့ တော်တော် စိတ်လှုပ်ရှားသွားပါတယ်။ ဒီနေ့ပွဲက စည်စည်ကားကားမှ ဖြစ်ပါ့မလားပေါ့လေ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျမတို့ရဲ့ အဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ သိပ္ပံတွဲတွေထားတဲ့ ကျောင်းဆောင်တွေဘက်မှာ ကျမတို့ သင်္ချာတွေကို သီးသန့်ထားတဲ့ စာကြည့်တိုက်အဆောင် ULB ဘက်မှာ “လိုက်ကြမလား၊ ဒီနေ့ပွဲရှိတယ်” ဆိုပြီး လှည့်ပြောကြပါတယ်။ တချို့က မနေ့က ကိစ္စကြောင့် ရပ်သွားတဲ့ အားကစားပွဲ တွေကို ပြန်လုပ်မယ်ထင်ပြီး ဘယ်မှာလဲ ဆိုတဲ့ စကားကို လိုက်မေးပါတယ်။ ကျမတို့က “R.C မှာပဲလေ” လို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ တချို့ကလည်း ဘာမှန်း သေချာမသိဘဲ ကျမတို့နောက်ကို လိုက်လာပါတယ်။
အဓိပတိလမ်းပေါ် ရောက်တော့ ရီရီထွန်းက ကျမကို “ရီတို့ လွယ်အိတ်တွေနဲ့ တားကြရအောင်” ဆိုလို့ ကျမရဲ့ လွယ်အိတ်နဲ့ ရီရီထွန်းရဲ့ လွယ်အိတ်ကို ပူးချည်လိုက်ပြီး အဓိပတိလမ်းမကို လွယ်အိတ်တွေနဲ့ တားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဒီကနေ့ ကျမတို့တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဗယ်ဆုရတဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံရင် ကျမတို့နဲ့ ပူးပေါင်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်လို့ တိုက်ပွဲစခေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျောက်တံတားလူ့ဘောင်သစ်နဲ့ ညှိနှိုင်းထားတဲ့ အင်းစိန်အုပ်စုလည်း ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေကို ဝှေ့ရမ်းပြီး အဓိပတိလမ်းပေါ် ရောက်ရှိလာပါတယ်။
ကျမတို့တွေ ကြွေးကြော်သံတွေ တိုင်လိုက်၊ ချီတက် ဆန္ဒပြလိုက် လုပ်နေရင်းက မနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင် ရောက်တော့ R.C ရှေ့မှာ ရပ်လိုက်ပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦး တရားဟောပေးပါလို့ အင်းစိန်အုပ်စုက ဆန္ဒပြုပါတယ်။ တရား မဟောခင်မှာ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသွားသူတွေ၊ ဒီမိုကရေစီအတွက် ရန်သူရဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေ ထဲမှာ၊ စစ်ကြောရေးတွေမှာ ကျဆုံးသွားသူတွေကို အလေးပြုမယ်လို့ စီစဉ်ကြပါတယ်။
ကိုဆန်နီက R.C ပေါ်ကနေ “နိုင်ငံတော် အလံကို အလေးပြု” လို့ အော်လိုက်တာနဲ့ ကျမတို့ ကျောင်းသား တွေ အားလုံး အလေးပြုဖို့ထရပ်လိုက်ကြပါတယ်။ ကျမတို့ အားလုံးရဲ့ မြင်ကွင်းထဲမှာ မော်ကွန်းထိန်း ဦးမြငွေ အပါအ၀င် တိုက်ပုံဝတ်ထားတဲ့ ဆရာတွေပါ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျမတို့တွေ အလေးပြုသလို အလေးလိုက်ပြုပါတယ်။ ကျဆုံးသွားတဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင် သူရဲကောင်းတွေကို အလေးပြုဆိုပြန်တော့ ခုနက ဆရာအုပ်စုက အလေးလိုက်ပြုပြန်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းတဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ တစ်မိနစ် ငြိမ်သက်ချိန်မှာလည်း ဆရာတွေက လိုက်ပြီး ငြိမ်သက်ပေးခဲ့တာကို အံသြဖွယ် မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
၁၀ ဒီဇင်ဘာဟာ ကျမတို့ လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ကျမ ကျောင်း မရောက်တော့ပါ။ မနေ့က ကျမရဲ့ နေအိမ်ကို ထောက်လှမ်းရေးလာတော့ ကျမမိသားစုက ကျမကို လုံခြုံတဲ့နေရာကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့နောက်မှ သိရတာက အဲဒီနေ့က ကျောင်းသားတွေက ပါချုပ်ဆီကို တောင်းဆို ချက်တွေ သွားပို့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ SB က ထည့်ထားတဲ့ ကျောင်းသားထောက်လှမ်းရေးတစ်ဦး ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းသားက ဒီအရေးတော်ပုံကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ရှိနေပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ရီပို့ တက်မလာလို့ အရေးယူခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းသားက ထောင်ထဲမှာ နှစ်စေ့တဲ့အထိ နေခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်ရောက်တော့ ကျမတို့ အင်းစိန်ထောင်ကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ ကျမတို့ ရောက်ရောက်ချင်း လာနှုတ်ဆက်တဲ့ ကောင်မလေးဟာ ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ဖမ်းခံရတဲ့ ကျောင်းသူ ၈ ဦးထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၇ ယောက်က ၁၁/ ၉၂ နဲ့ လွတ်သွားပေမဲ့ တစ်ဦးတည်း ကျန်နေခဲ့တဲ့ တိုးတိုးမြင့် ခေါ် ဖိုးသာထူးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ နှစ်စေ့အောင် နေခဲ့ရပြီး ထောင်ထဲမှာ အစာအိမ်ရောဂါကို အပြင်းအထန် ခံစားနေခဲ့ရချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၁ မှာ ကျောင်းသား ၄၀၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ဒဏ် နှစ်ကြီးတွေ ချခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ ဗိုလ်စောမောင်ဆီကနေ၊ ဗိုလ်သန်းရွှေက အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီး ၁၁/၉၂ အမိန့်ကြေညာချက်နဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွေ ပေးလိုက်ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက မတရားဖမ်းဆီးထားသူ တော်တော်များများကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့ ချန်ထားခဲ့တဲ့ လူတွေကို အညှိုးတကြီးနဲ့ နှစ်စေ့တဲ့ အထိ ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ်ဆိုရင် ၁၀ ဒီဇင်ဘာပွဲဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး စီးကြောင်းထဲကို မျိုးဆက်သစ်တွေလည်း စီးဝင်လာသလို မျိုးဆက်ဟောင်းတွေကလည်း ဆက်လက် စီးဆင်းလျက်ပါ။ ကျမတို့ ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မောင်းနှင်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာ ကျရာနေရာက ပါဝင်နေကြတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေတွေကို လွမ်းလျလို့ ရေးဖြစ်လိုက်တဲ့ စာတစ်စောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် (NLD) ရဲ့ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများပညာရေးရံပုံငွေအဖြစ် ဂီတဖျော်ဖြေရေးနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ရံပုံငွေပွဲမှာ The Trees, Emperor, Metal Zone, Plus 3, Spectrum, Lazy Club, Vertical Vibration, Hip-Hop (ACID, Cyclone, Snare, Blue Berry)၊ Young Rock Bands – Big Bag, Reason, Wanted ဂီတအနုပညာရှင်အဖွဲ့ များတွေက - Rဇာနည်၊ ဟဲလေး၊ ဥာဏ်လင်းအောင်၊ အေသင်ချိုဆွေ၊ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ ချမ်းချမ်း၊ ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ အဲလက်စ်၊ ဘိုဖြူ၊ ဖြိုးကြီး၊ သျှီ၊ အိမ့်ချစ်၊ ဟယ်ရီလင်း၊ မာရဇ္ဇ၊ ဟန်ထွန်း၊ လင်းလင်း၊ ဂျီလတ်၊ သအို၊ အောင်ခန့် ၊ ချစ်သုဝေ၊ N ကိုင်ရာ၊ မျိုးကျော့မြိုင်၊ ဆောင်းဦးလှိုင်၊ စည်သူလှိုင်၊ စည်သူလွင်၊ မိုးမိုး၊ မေခလာ၊ ရှင်ဘုန်း၊ နီနီဇော်၊ ခင်ဘုန်း၊ ထူးအယ်လင်း၊ Sကဲနက်၊ လင်းနစ်၊ နွဲ့ ယဉ်ဝင်း၊ ကဗျာဘွဲ့ မှူး၊ မီးမီးခဲ၊ သံသာဝင်း၊ ဇော်ပိုင်၊ Lလွန်းဝါ၊ ဖိုးကာ၊ အ၀ိုင်း၊ ထက်နေကြည်၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ ယုဇန၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊ ကိုရဲလွင်၊ ကိုနေ၀င်း၊ သားထွေး၊ ဂျေမောင်မောင်၊ ဂျေညီညီ၊ ရင်ဂို၊ စံလင်း၊ တိုးလွင်၊ အောင်အောင်၊ အုပ်ကြီး၊ ညီညီလွင်၊ ကိုထွဋ်၊ စိုးထက်၊ ဂျေညီမလေး၊ ကောင်းမြတ်၊ ကြက်ဖ၊ ရသ၊ ဘိုလေး၊ ယုန်လေး၊ ငယ်ငယ်၊ စန္ဒီမြင့်လွင်၊ Jenny တို့ပါဝင်သီဆိုဖြော်ဖြေကြဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တူမယ်ထင်တဲ့ ဂျပန်သရုပ်ဆောင်
[ Motoki Kobayashi ]
samurai leader from motoki kobayashi on Vimeo.
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, December 12, 2011 Links to this post
သတ်ဖြတ်ခံရသည့် ရွာသားနှစ်ဦး အတွက်လျော်ကြေး မိသားစု...
ချင်းအမျိူးသားနေ့အဖြစ် တရားဝင် ကျင်းပခွင့်ပြုရေးေ...
တောင်းပန်ကြားလွှာနှင့် အတူ လက်မှတ် ၁ သောင်းကျော် သံ...
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကုလနျူကလီးယား စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ...
ရွှေည၀ါ ဆရာတော် သာဓု ပရိယတ္တိ ကျောင်းတိုက်သို့ သွားေ...
တရုတ်သံအမတ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံဟုေ...
နိုင်ငံရေး ဆန်တဲ့ အနုပညာကို ပရိသတ် အတွက် ဖန်တီး ပြ...
လယ်ယာထွက်ကုန်များ တရုတ်တင်ပို့နိုင်ရေး မြန်မာတောင်...
အန်အယ်လ်ဒီပါတီ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်အမှတ်ရရှိပါက ဒီလှို...
ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) နှင့် ရွှေညဝါဆရာတော်တို့...
တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်နေသည့် နယ်စပ်ဒေသများတွင်...
ပိုလန်နိုင်ငံသို့ NLD လူငယ်များ ပထမအကြိမ် သွားရောက...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အား တရားဝင် မှတ်...
ဒေါ်အောင်ဆနးစုကြည်နှင့် အနုပညာရှင်များ တွေ့ဆုံမှု အ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် (NLD) ရဲ့ပြည်ထောင...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တူမယ်ထင်တဲ့ ဂျပန်သရုပ်ဆော...
ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင် ကို မင်္ဂလာဒုံမှာ ရုံးထုတ်စစ်ဆေး...
“ခမောက်”သည် NLD နဲ့မသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း နိုင်ငံပို...
ပြည်သူတွေ ပါဝင်ရမယ့် နိုင်ငံရေးတစ်ခေတ်ဆန်းပြီ (မော...
ဝန်ကြီးများရုံးနှင့် တရားရုံးချုပ် ပြတိုက်အဖြစ်ပြေ...
ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်မှ ပိုးသတ်ဆေး စက်ရုံမှ ထွက်သော အ...
(နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိခဲ့ခြင်းနှစ် ၂၀ ပြည့်...